စစ်ကြည့်တော့ သားလေးဆိုတာ သိရတယ်။ ခုဆို ၆ လထဲမှာ သူက တအားလှုပ်တယ် ကန်တယ်။ ကျမ လမ်းလျှောက်ရင် ဗိုက်ကြီးကတင်းပြီး နာတော့ ဆေးစစ်တာ ရေမြွှာရေက သာမာန်ထက် ပိုများနေတယ်တဲ့။ အဲဒါ ဆရာဝန်က လမ်းမလျှောက်ဘဲ နားခိုင်းပါတယ်။ ကျမကလည်း တခါတလေတော့ ခပ်ဝေးဝေးသွားမိတယ်။ ကျမက စာတမ်းအတွက် သုတေသနလုပ်ဖို့ ကျောင်းကိုတော့ စာအုပ်တွေနဲ့ လျှောက်ရတာပါပဲ။ တခါတလေ အိပ်လည်းမပျော်ဘူး။ ဗိုက်ကလည်း လေးနေသလိုပဲ။ အဲဒါ သူငယ်ချင်း တယောက်က ရေမွှာရေများရင် ကလေးက တခုခု ချို့ယွင်းတတ်တယ် ဆိုလို့ ဟုတ်သလား။ ဟိုတလောကလည်း ဖျားတော့ ကလေးအားဆေးတွေ ဖြတ်ထားမိတယ်။ ၂ ပတ်လောက် ကြာတယ်ပေါ့။ ဘာပြင်ဆင်သင့်သလဲ ဆရာရှင့်။
- Nonstress test ကလေးနှလုံးခုန်နှုန်းကို ကလေးလှုတ်ရှားရင် ဘယ်လောက်အထိ ရှိလာသလဲသိအောင် လုပ်နည်း၊
- Biophysical profile ကလေး Nonstress test ကလေးနှလုံးခုန်နှုန်း + အသက်ရှူမှုနဲ့ လှုတ်ရှားမှုစစ်နည်း + ရေမြွာရည် ထုထည်တွေကို စစ်နည်း၊
ဆေးစာတွေ ရေးတိုင်း သတိပေးတာတခု ထပ်ရေးပါရစေ။ ယာယကံရှင်တွေကို ဖတ်စေတာ တခါတလေ ကောင်းပေမဲ့ တခါတလေ အားလုံးကုန် မဖတ်စေချင်ဘူး။ လူတွေဟာ အစိုးရိမ်နည်းသူ-များသူ မတူကြဘူး။ ဆေးစာဆိုတော့ ကုန်အောင်-စုံအောင် ရေးရတယ်။ အားလုံး ကိုယ့်မှာ လာဖြစ်မလား စိုးရိမ်တာ မမှန်ပါ။ ဆရာဝန်က ချန်ရေးတာလဲ မသင့်ဘူး။ နောက်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရသူတွေဟာ အပေါင်းအသင်းလဲ အပြုသဘော အားပေးတတ်သူတွေနဲ့သာ ပေါင်းသင့်တယ်။ စာကိုလဲ သားရွှေအိုးထမ်းလာတာမျိုးသာ ဖတ်သင့်ကြတယ်။ စာဖတ်တဲ့သူ သားကောင်းရတနာ ထွန်းကားပါစေ။
Chromosome Analysis and Amniocentesis (ခရိုမိုဇုမ်း) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း နဲ့ ရေမြွှာရည်စစ်ဆေးခြင်း
(၁) မျိုးရိုးဗီဇ ချို့ယွင်းမှုလို့ ဘယ်အချက်နဲ့ ပြောနိုင်သလဲဆရာ။ ကုထုံး လုံးဝမရှိတော့တာလား။ ရိုသေစွာဖြင့်။
(၂) ကျွန်မ အသက် ၃၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ ယခု ပထမဦးဆုံး ကိုယ်ဝန် ၁၂ ပါတ်ရှိပါပြီ။ OG နှင့် ပုံမှန်ပြနေသည်မှာ ၃ ကြိမ် ရှိပါပြီ။ ယခုတစ်ကြိမ်တွင် ဆရာဝန်မှ Chromosome Analysis နဲ့ Amniocentesis (Amniotic Fluid) နှစ်မျိုးကို ၁၆ ပါတ် အတွင်း စစ်ဆေးသင့်ကြောင်းပြောပါသည်။ မည်သည့်အတွက် စစ်ဆေးသင့်သည်၊ မည်သို့ ကွာခြားသည်၊ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုး၊ နောက်ထပ် စစ်ဆေးသင့်သည်များကို ဖြေကြားပေးစေလိုပါသည်။
Chromosomes (ခရိုမိုဇုမ်း) ဆိုတာ လူတိုင်းရဲ့ သွေးနီဥကလွဲရင် (ဆဲလ်) တိုင်းမှာရှိတဲ့ မျိုးဗီဇဖြစ်တယ်။ (ဆဲလ်) တိုင်းမှာ ၄၆ ခု (၂၃ စုံ) စီရှိတယ်။ အဖေစစ်၊ အမေစစ်တွေဆီကနေ ရကြတာဖြစ်တယ်။ ၂၂ စုံကို Autosomes (အောတိုဇုမ်း) ခေါ်ပြီး ကျန်တဲ့တစုံကို ကျား-မဖြစ်တာကို ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ Sex chromosomes (ဆက်စ်-ခရိုမိုဇုမ်း) ခေါ်တယ်။ မ ဆိုရင် X sex chromosomes ၂ ခုပါမယ်။ ကျားဆိုရင် X sex chromosome တခုနဲ့ Y sex chromosome တခုပါတယ်။
Chromosome analysis (ခရိုမိုဇုမ်း) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုတာ ၄၆ ခုရဲ့ အရေအတွက်နဲ့ တည်ဆောက်ပုံကို လေ့လာတာ ဖြစ်တယ်။ Karyotype လို့လဲခေါ်တယ်။ အများအားဖြင့် သွေးဖြူဥ (ဆဲလ်) ထဲက ရှိတာကို ရေတွက်တယ်။
• ကလေး ဖွံ့ထွားမှုကို သံသယဝင်ရင်စစ်မယ်။
• ပုံပန်းတမျိုးဖြစ်နေရင် စစ်မယ်။
• မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက် ပါလာရင်စစ်မယ်။
• လိင်အင်္ဂါပုံမှန်မဟုတ်ရင် စစ်မယ်။
• ကလေးအသေမွေးတာ၊ မွေးမွေးချင်းသေတာ၊ ဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲ သိအောင်စစ်မယ်။
• ကလေးမရနိုင်သူ၊ ခဏခဏ ကိုယ်ဝန်ပျက်သူ၊ ရာသီတခါမှမလာသူကို စစ်မယ်။
• သားဦးကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတာ (မွေးမဲ့အချိန်မှာ) အသက် ၃၅ ကျော်နေရင်လဲစစ်တယ်။ (ခရိုမိုဇုန်း) ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ကလေး မွေးလာမှာ စိုးလို့ဖြစ်တယ်။
• (ခရိုမိုဇုန်း) ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ မိသားစုရာဇဝင် ရှိနေသူကိုလဲ စစ်မယ်။
• သိတားဘို့က အဲလိုစစ်တိုင်းလဲ ပုံမှန်မဟုတ်တာ အားလုံးကို မသိနိုင်ဘူး။
ဒီနည်းကို စမ်းသပ်ဘို့ရော ကုသဘို့အတွက်ပါ လုပ်တယ်။ ဒီအရည်ထဲမှာ အထဲက သန္ဓေသားရဲ့ (ဆဲလ်) တွေနဲ့ သူကနေ ထုတ်တဲ့ ဓါတ်တွေ ပါနေတယ်။
1. Genetic amniocentesis ဆိုတာ မျိုးဗီဇပုံမှန်မဟုတ်တာသိအောင် စမ်းနည်းဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဝန် ၁၅ ပတ် နောက်ပိုင်းမှာ လုပ်တယ်။ ဒီအချိန်ရောက်မှ ရေမြွှာအိတ်နှစ်လွှာက ပေါင်းစပ်တယ်။ တချို့ကလည်း ၁၁ ပတ် ကတည်းက လုပ်တယ်။ Down syndrome နဲ့ Spina bifida ရောဂါတွေကို ကြိုသိထားနိုင်တယ်။
2. Maturity amniocentesis စစ်နည်းလုပ်ရင် ကလေးရဲ့ အဆုပ်အခြေအနေကို သိမယ်။ ကိုယ်ဝန် ၃၂ ပတ်နဲ့ ၃၉ ပတ်ကြားလုပ်တယ်။
ဒီစမ်းသပ်နည်းမှာ အန္တရာယ်တွေတော့ သတိထားရတယ်။
• Miscarriage ကိုယ်ဝန်ပျက်နိုင်တယ်။ ၃ဝဝ-၅ဝဝ မှာ ၁ ယောက်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်နုရင် ပိုဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်။
• Cramping and vaginal bleeding ဗိုက်နာတာနဲ့ သွေးနဲနဲဆင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်။
• Needle injury ဆေးထိုးအပ်ကနေ ကလေးကိုထိခိုက်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆိုးတာအတော်ရှားတယ်။
• Leaking amniotic fluid ရေမြွှာရည်ဆင်းတတ်တယ်။
• Rh sensitization သွေးအုပ်စုခွဲနည်းတခုထဲက (အာရ်အိတ်ခ်ျ) ကလေးရဲ့ သွေးနီဥက မအေရဲ့သွေးထဲဝင်ရင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ တကယ်လို့ မိခင်လောင်းဟာ Rh negative ဖြစ်နေရင် Rh immunoglobulin ဆေးထိုးပေးမယ်။
• Infection ပိုးဝင်တာလဲ သတိထားရတယ်။
• Infection transmission တကယ်လို့ မိခင်လောင်းမှာ HIV, Hepatitis C, Toxoplasmosis ရှိနေရင် ကလေးဆီ ကူးစေနိုင်တယ်။
Pregnancy Tests (2) ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် စမ်းသပ်ရမဲ့ စစ်ဆေးနည်းများ http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/05/pregnancy-tests-2.html
ဒမ်ဘာဘား၏ တစ်လုံးတည်းသော ဂိုးဖြင့် အနိုင်သုံးမှတ်ရခဲ့သည့် ချယ်ဆီး
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် (၃၄) ဆွမ်ဆီးနှင့် ချယ်ဆီး ပွဲစဉ်တွင် ဧည့်သည်အသင်းက ဒမ်ဘာဘား၏ တစ်လုံးတည်းသော ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိသွားခဲ့သည်။
ဆွမ်ဆီးတွင် ဗွန်၊ ရိန်ဂျယ်၊ ချီကို၊ ဝီလျံစ်၊ ဒေးဗစ်၊ ဘရစ်တန်၊ ရှယ်ဗီ၊ ဒိုင်ယာ၊ ဟာနန်ဒက်ဇ်၊ ရုဒ်လက်ခ်ျ၊ ဘိုနီတို့ ပါဝင်ကစားခဲ့သည်။
ချယ်ဆီးတွင် ဆက်ခ်ျ၊ အိုင်ဗန်နိုဗစ်၊ ကာဟေးလ်၊ တယ်ရီ၊ အက်ဇ်ပီလီကွိုင်တာ၊ ရာမီးရက်စ်၊ မာတစ်၊ ဆာလား၊ ဝီလျံ၊ ရှာရယ်လ်၊ ဘား တို့ပွဲထွက် ပါဝင်ခဲ့သည်။
ပွဲအစ ၆ မိနစ်တွင် ချယ်ဆီးအသင်း အဖွင့်ဂိုး ရရှိလုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း အိုင်ဗန်နိုဗစ် ပေးပို့သည့် ဘောလုံးကို ဘားရရှိသွားပြီး ထပ်မံ ပေးပို့သည့် ဘောလုံးကို ဆာလား ပိတ်သွင်းရာ ဂိုးဘေးကပ်ထွက်ခဲ့သည်။ ၁၄ မိနစ်တွင် အိန်ဂျယ်ရိန်ဂျယ် တင်ပေးလိုက်သည့် ဘောလုံးကို ဘိုနီ ခေါင်းတိုက်သွင်းရာ ဆက်ခ်ျ အလျင်အမြန် ပုတ်ထုတ် ကာကွယ်ခဲ့ရသည်။ ၁၅ မိနစ်တွင် ချယ်ဆီး၏ တန်ပြန်တိုက်စစ်ကို ဟန့်တားခဲ့သည့် ချီကို အဝါကတ်ထိခဲ့သည်။ ၁၆ မိနစ်တွင် ဘယ်ခြမ်းမှ ထိုးဖောက် တိုက်စစ်ဆင်လာသည့် ရှာရယ်လ်ကို ဟန့်တားခဲ့သည့် ချီကို ဒုတိယ အဝါကတ်ထိခဲ့သောကြောင့် အနီကတ်ဖြင့် ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသည်။ ပွဲချိန် ၄၅ မိနစ်ပြည့်ပြီး နာကျင်အချိန်ပို ၂ မိနစ်တွင် ဆာလားက နောက်ထပ် ဂိုးသွင်းခွင့် ရရှိခဲ့သောကြောင်း ၎င်း၏ ကန်သွင်းချက်မှာ ဂိုးဘေးထွက်ခဲ့သည်။
ဒုတိယပိုင်းတွင် တစ်ယောက်အသာဖြင့် ကစားရသည့် ချယ်ဆီးကသာ ပွဲကိုစိုးမိုးခဲ့သည်။ ၅၆ မိနစ်တွင် အိုင်ဗန်နိုဗစ် တင်ပေးလိုက်သည့် ဘောလုံးကို ဘား ခေါင်းတိုက်သွင်းသော်လည်း ဂိုးဘေး ထွက်ခဲ့သည်။ ၅၈ မိနစ်တွင် ဆွမ်ဆီးနောက်ခံလူ ဝီလျံစ်၏ အမှားမှတစ်ဆင့် အီတူး ရရှိသွားပြီး ၁၀ ကိုက်အကွာမှ ကန်သွင်းသော်လည်း ဂိုးဘေးထွက်ခဲ့သည်။ ၆၀ မိနစ်တွင် ဆွမ်ဆီးက ဂိုးရရှိလုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ရုဒ်လက်ခ်ျ ပေးပို့သည့် ဘောလုံးကို ဘိုနီက ဂိုးအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ကြိုးစားသော်လည်း ချယ်ဆီး နောက်ခံလူများက ဖျက်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၆၈ မိနစ်တွင် ချယ်ဆီးက အဖွင့်ဂိုး ရရှိသွားခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဂိုးကို ဒမ်ဘာဘားက ဆွမ်ဆီး နောက်ခံလူ ဝီလျံစ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး သွင်းယူသွားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ချယ်ဆီးက ဂိုးထပ်မံ သွင်းယူရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ပွဲအပြီးတွင် ဒမ်ဘာဘား၏ တစ်လုံးတည်းသော သွင်းဂိုးဖြင့်သာ အနိုင်ရရှိသွားခဲ့သည်။
ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့်အတွက် ရာနှုန်းပြည့် နိုင်ပွဲရရန် လိုအပ်ကြောင်း အာတီတာ သတိပေး
အဲဗာတန်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး အဆင့် ၄ နေရာတွင် ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် လက်ကျန် ၅ ပွဲစလုံးကို အနိုင်ရရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း အာဆင်နယ် ကွင်းလယ် ကစားသမား မိုက်ကယ် အာတီတာက အသင်းဖော်များအား သတိပေး ပြောကြားလိုက်သည်။
အာတီတာသည် စနေနေ့က ဝီဂန်ကို အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် အက်ဖ်အေဖလား အကြိုဗိုလ်လုပွဲတွင် ခြေသလုံး ကြွက်သား ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ချိန်ဘာလိန်၊ ရမ်ဆေး၊ မွန်ရီရယ်နှင့် ကာဇိုလာတို့မှာလည်း အင်္ဂါနေ့ညတွင် ဝက်စ်ဟမ်းနှင့် ကစားမည့်ပွဲ၌ ပါဝင်နိုင်ရန် မသေချာပေ။
ထို့အတွက် အာဆင်နယ် အနေဖြင့် အဆင့် ၄ နေရာမှ အဲဗာတန်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ရန် အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် လက်ကျန် ၅ ပွဲစလုံးကို အနိုင်ရရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အက်ဖ်အေဖလား အကြိုဗိုလ်လုပွဲသည် အသင်းအတွက် အပြောင်းအလဲ တစ်ရပ် ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း အာတီတာက ဆိုခဲ့သည်။
ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အာတီတာက “ကျွန်တော်တို့အတွက် မျှော်လင့်ချက် ရှိပါသေးတယ်။ ရာသီကုန်ဖို့ကလည်း လေးပတ် လိုပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ကျန်ပွဲ အားလုံးကို အနိုင် ကစားနိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် ရရှိမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါဟာ ယုံကြည်မှုနဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အက်ဖ်အေဖလား အကြိုဗိုလ်လုပွဲ ရလဒ်ကလည်း ကျွန်တော်တို့အတွက် အပြောင်းအလဲတစ်ခု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်” ဟု အာတီတာက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယူကရိန်း အရှေ့ပိုင်း အခြေအနေ ဆိုးလာနေ
Horlivka မြို့က ရဲစခန်းကို ဝင်မသိမ်းမီ ခဲနဲ့ ပစ်နေသူများ။
ယူကရိန်း နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းမှာ ရုရှား လိုလားသူတွေ သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ အဆောက်အဦ တွေကနေ ထွက်ခွာသွားဖို့ ယူကရိန်း အစိုးရက ရာဇသံပေးထားတဲ့ နောက်ဆုံးအချိန် ကျော်သွားပေမယ့် ဆန္ဒပြသူတွေက Horlivka မြို့က ရဲစခန်း တစ်ခုကို ချိုးဖျက် ဝင်ရောက်ပြီး ထပ်မံ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ဗီဒီယို တွေထဲမှာ လက်နက် ကိုင်ထားတဲ့ ဆန္ဒပြသူ လူ တစ်ရာကျော် လောက်က အဆောက်အဦကို တိုက်ခိုက်နေပြီး လူအုပ်စုကြီး တစ်စုက ရဲအရာရှိ တစ်ယောက်ကို ရိုက်နှက် နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ အစိုးရ အဆောက်အဦးတွေကနေ ဖယ်ပေးဖို့၊ မဖယ်ရင် အင်အားသုံး ဖယ်ရှားရလိမ့်မယ်လို့ ယူကရိန်း အစိုးရက ရာဇသံ ပေးထားတဲ့ သတ်မှတ်ချိန် ကျော်သွားပေမယ့် တခြား မြို့တွေမှာလည်း လက်နက် ကိုင်ထားသူတွေက အဆောက်အဦ တွေကို ဆက်လက် သိမ်းပိုက်ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Loviansk နဲ့ Donetsk မြို့တွေမှာ အဆောက် အဦတွေကို သိမ်းထားသူတွေက လက်နက်တွေ ကိုင်ထားပြီး ခုခံဖို့ ပြင်ထားကြတဲ့ အတွက် သတိပေးမှုကို လိုက်နာမယ့် အနေအထား မရှိဘူးလို့ သတင်းထောက်တွေက ပြောပါတယ်။
ရုရှား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆာဂေရီ လက်ဗ်ရောဗ် က ယူကရိန်း အရှေ့ပိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ လျှို့ဝှက် ထောက်လှမ်းရေးတွေ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲမှုတွေကို ငြင်းဆိုခဲ့ ပါတယ်။
လေယာဉ် ရှာဖွေဖို့ လူမဲ့ ရေငုပ်သင်္ဘော အသုံးပြု
အဓိက ရှာဖွေမယ့် နေရာ
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ မလေးရှား လေယာဉ်ကို ပထမဆုံး အကြိမ် လူမဲ့ ရေငုပ်သင်္ဘော အသေးစားကို သုံးပြီး ရှာဖွေဖို့ စီစဉ်နေကြပါတယ်။
အဲဒီ ရေငုပ် သင်္ဘောဟာ ပျောက်ဆုံး လေယာဉ်ရဲ့ လေယာဉ် ပျံသန်းမှု မှတ်တမ်းတင် ကိရိယာ Black Box ကနေ ထုတ်လွှတ်တဲ့ အချက်ပြ အသံလှိုင်း လာရာ နေရာလို့ ယူဆရတဲ့ သြစတြေးလျ ကမ်းခြေ အနီးက အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ ရေအောက် ကြမ်းပြင်ကို လျှပ်တိုက် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေယဉ် ရှာဖွေရေး ဆိုင်ရာ သြစတြေးလျ တာဝန်ခံ အရာရှိ တစ်ယောက် ကတော့ အခုချိန်လောက် ဆိုရင် Black Box မှာ ပါတဲ့ ဘက်ထရီအား ကုန်လောက်ပြီလို့ ထင်ရကြောင်း ပြောပါတယ်။
ရှာဖွေရေး လုပ်နေတဲ့ လက်ရှိ နေရာအတွင်းမှာ ဆီတွေကို တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပေမယ့် ဒါဟာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ မလေးရှား လေယာဉ် MH370 က ဟုတ် မဟုတ် စမ်းသပ်နိုင်ဖို့ ရက်အတန် ကြာလိမ့်ဦးမယ်လို့ သူက ဖြည့်စွက် ပြောပါတယ်။
Breast Benign Lumps ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ ရင်သားအကျိတ်များ
(၁) ဆရာ ကျမနာမည်က့့၊ အသက် ၃၁၊ အပျိုပါ၊ ကျမအခု့့မှာပါ။ ကျမဘယ်ဖက်နို့ဘေး ချိုင်းအောက်မှာ အလုံးတစ်လုံး ဂေါ်လီလုံးအရွယ်ရှိတယ်။ သုံးနစ်လောက်ကြာပြီ။ အလုံးကမာပြီး ရွေ့လို့ရတယ်၊ ဆရာဝန် တစ်ခါပြဖူတယ်၊ ဘာမှာမဖြစ်ဘူးဆိုပြီး ဒီတိုင်ထားတယ်တယ်။ အခုရာသီလာချိန် နည်းနည်းကိုက်သလိုခံစားရတယ်။ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိင်ပါသလား။ ခွဲစိတ်ဖို့ လိုမလားလို့ဆရာကို လှမ်းမေးကြည့်တာ၊ မျိုးရိုးမှာလဲ ကင်ဆာတော့ မရှိဘူးဆရာ။
(၂) သမီး 18 March က Breast Ultrasound ရိုက်ပြီးပါပြီဆရာ။ Attachment နဲ့ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ သွားပြန်ပြတော့ အကျိတ်ကသေးတယ်၊ ခွဲစရာမလိုဘူး၊ မစိုးရိမ်ရဘူးပြောပါတယ်။ အမြဲတော့ကိုယ်ဖာသာကို သတိထားပြီးကြည့်၊ တစ်နှစ်တစ်ခါ Ultrasound ပြန်ရိုက်ကြည့်လို့ပဲ ပြောပါတယ်။ ဘာဆေးမှမပေးလိုက်ပါဘူးဆရာ။ ဆေးခန်းပြပြီး တစ်ပတ်လောက်နေတော့ မာမာအမြောင်းလိုလို အလုံးလိုလိုအကျိတ်က သေးလဲမသေးသွားတော့ စိတ်ပြန်ပူလာတယ်၊ စိုးရိမ်စိတ်လဲဖြစ်လာတယ်။ မေးစရာမေးခွန်းနဲ့ သိချင်တာတွေလဲရှိလာလို့ ဆရာ့ကို Email ထပ်ပို့လိုက်ရတာပါ။ ဘာဆေးသောက်ရင် ပျောက်နိုင်လဲ။ စိုးရိမ်ရလားဆရာ။
(၃) ဆရာ သမီးညီမလေးက ရင်သားမှာ အကျိတ်ဖြစ်နေတာကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လလောက်က စပြီးစမ်းမိပါတယ်။ ခွဲမယ် ခွဲမယ်နဲ့ မခွဲဖြစ်ပဲနေနေရတုန်းပဲ။ အသက်က ၃၁နှစ်ပါ အိမ်ထောင် မရှိပါဘူး။
(၄) သမီး 18 March က Breast Ultrasound ရိုက်ပြီးပါပြီဆရာ။ Attachment နဲ့ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ သွားပြန်ပြတော့ အကျိတ်ကသေးတယ်၊ ခွဲစရာမလိုဘူး၊ မစိုးရိမ်ရဘူးပြောပါတယ်။ အမြဲတော့ကိုယ်ဖာသာကို သတိထားပြီးကြည့်၊ တစ်နှစ်တစ်ခါ Ultrasound ပြန်ရိုက်ကြည့်လို့ပဲ ပြောပါတယ်။ ဘာဆေးမှမပေးလိုက်ပါဘူး။ ဆေးခန်းပြပြီး တစ်ပတ်လောက်နေတော့ မာမာအမြောင်းလိုလို အလုံးလိုလိုအကျိတ်က သေးလဲမသေးသွားတော့ စိတ်ပြန်ပူလာတယ်၊ စိုးရိမ်စိတ်လဲဖြစ်လာတယ်။ မေးစရာမေးခွန်းနဲ့ သိချင်တာတွေလဲရှိလာလို့ ဆရာ့ကို Email ထပ်ပို့လိုက်ရတာပါ။ ဘာဆေးသောက်ရင် ပျောက်နိုင်လဲ။ စိုးရိမ်ရလားဆရာ။
(၅) ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် 35 နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင် (ရည်းစား) မရှိပါ။ ညာဘက် nipple အပေါ်တည့်တည့်နားလောက်မှာ မာမာခဲခဲ mass လေးတစ်ခု စမ်းမိသလိုရှိလို့ပါ။ ဆရာ့ blog ထဲက ရင်သားကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တွေတော့ အားလုံးလိုလိုဖတ်ပြီးပါပြီ။ ပုံမှန်ဟုတ်သလိုလို မဟုတ်သလိုလို ဝေခွဲမရဖြစ်နေလို့ပါဆရာ။ ဘယ်ဘက်မှာလည်း ရှိသလိုလို ထင်မိပေမယ့် ညာဘက်က တော်တော်ထင်ရှားပါတယ်။ ညာဘက် breast က ဘယ်ဘက်ထက် အပေါ်နည်းနည်း ရောက်နေသလိုတော့ ရှိပါတယ်။ မာခဲပါတယ်။ ဖိလိုက်ရင်နေရာရွေ့သလိုလိုရှိပါတယ်။ နည်းနည်းနာတာ သူ့သဘာဝလား လက်ဖိအားကြောင့်လား မသဲကွဲပါဘူးဆရာ။ အဲဒီနေရာမှာ အဲလိုမာခဲခဲအလုံးလေးလိုလိုအမြှောင်းလေးလိုလိုရှိနေတာ ဘာဖြစ်နိုင်ပါသလဲဆရာ။
မိန်းကလေးတိုင်း အမျိုးသမီးကြီးငယ်တိုင်း ကိုယ့်ရင်သာကိုယ် စမ်းသပ်ပြီး၊ သံသယရှိရင် ချက်ချင်း ဆရာဝန်ကို ပြသင့်တာ သိနေကြပါပြီ။ ကင်ဆာဆိုရင် ကြောက်စရာမှန်ပေမဲ့ စောစောသိလို့ စနစ်တကျကုသရင် အများကြီး ကောင်းစေတဲ့ ကင်ဆာထဲမှာ ရင်သားကင်ဆာက ထိပ်ကနေတယ်။ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ ရင်သားအကျိတ်တွေက ၈ဝ% ရှိတယ်။ အမျိုးအစားကတော့ များပါတယ်။ ယေဘုယျပြောရရင် အကျိတ်နခမ်းသားက ချောမွေ့နေမယ်၊ ရွေ့ရှားလို့လဲ လွယ်တယ်။ နောက်ပြီး အကျိတ်ရယ်လို့ မဟုတ်ဘဲ ထိခိုက်မိလို့။ လစဉ်နဲ့ အသက်ကြောင့် ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ၊ ဆေးဝါးတွေကနေလည်း ရင်သားမှာ အရင်လိုမဟုတ်တာမျိုး ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ရင်သား နှစ်ဘက်ဟာ တသက်လုံး ပြောင်းလဲနေတာပါ။
ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ ရင်သားအကျိတ်တွေကတော့ -
(၁) Fibrocystic changes (ဖိုက်ဘရိုဆစ်စတစ်) အပြောင်းအလဲ။ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲနေတာကနေ ဖြစ်စေတယ်။ နှစ်ဘက်လုံးမှာ ဖြစ်တာများတယ်။ ဥပမာ ရာသီမလာခင် တင်းပြီး နာချင်တာမျိုး။ တခါတလေ နို့သီးအဖျားကိုညှစ်ကြည့်ရင် အရည်လိုပါ ထွက်နိုင်သေးတယ်။ အကျိတ်လိုဖြစ်နေတာ အချောင်းလိုက်၊ အမြှောင်းလိုက်နေမယ်။ စမ်းကြည့်ရင် ခပ်မာမာ ရာဘာနဲ့တူတယ်။ အသက် ၄ဝ အောက်မှာသာအဖြစ်များတယ်။
(၂) Simple Cysts ရိုးရိုး (ဆစ်)။ အရည်ပြည့်နေတဲ့အိတ်လေးမျိုးဖြစ်တယ်။ တခုတည်းရော တခုမကပါဖြစ်နိုင်တယ်။ အရွယ်အစားလဲ အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်။ နာနိုင်တယ်။ နာတာကလည်း ရာသီခွင်နဲ့အမျှပြောင်းတယ်။
(၃) Fibroadenomas (ဖိုက်ဘရိုအဒီနိုးမား)။ အများဆုံးတွေ့ရတဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ အစိုင်အခဲဖြစ်နေမယ်။ စမ်းကြည့်ရင် ရင်သားအတွင်းထဲမှာ ရွေ့တာ သိပ်လွယ်ကူတယ်။ ဒါကြောင့် နို့ထဲကကြွက်လို့တင်စားခေါ်ကြတယ်။ ခွဲစိတ်ပေးရတာများတယ်။ အသက် ၂ဝ-၃ဝ အတွင်း အများဆုံးဖြစ်တယ်။
(၄) Intraductal papillomas နို့ပြွန်တွင်းက (ပက်ပလိုမား)။ သေးတယ်၊ အသေအချာကြည့်ရင် ကြွက်နို့လိုတူတယ်။ နို့သီးအနာတဝှိုက်မှာတွေ့ရတယ်။ အသက် ၄ဝ-၅ဝ တွေမှာပိုဖြစ်ပြီး နို့သီးအဖျားကနေ သွေးထွက်နိုင်တယ်။
(၅) Traumatic fat necrosis ထိခိုက်မိလို့ အဆီခဲတွေပျက်စီးခြင်းဖြစ်တယ်။ ခပ်ဝိုင်းဝိုင်း။ ခပ်တင်းမာမာ၊ တခုတည်းရှိပြီး၊ မနာဘူး။
(၆) Mastitis (Breast Infection) နို့နာ။ နို့ပိုးဝင်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ အကျိတ်ဖြစ်မယ်၊ နာမယ်၊ အပေါ်ယံအရေပြား နီမြန်းနေမယ်။ အနာက အရေပြားနဲ့နီးမှသာ နီတာမြင်ရမယ်။ အပူချိန်စမ်းရင် ပိုပူနေမယ်။
(၇) Breast Pseudolumps အကျိတ်မဟုတ်တဲ့ အကျိတ်။ ရင်သားအတုထဲက (စီလီကွန်) တနေရာကထူပျစ်လာတာ၊ အဆီခဲတချို့သေတာ၊ အောက်ကနံရိုး။ Breast cancer ကင်ဆာ၊ Lipoma အဆီအကျိတ် နဲ့ Milk cyst (galactocele) နို့ရည်ခဲတွေလည်း ထည့်စဉ်းစားရမယ်။
ရောဂါနာမည်တွေ အင်္ဂလိပ်လိုပါရေးထားလို့ စိတ်မပူ၊ စိတ်မရှုတ်ပါနဲ့။ ၁၊ ၂၊ နဲ့ ၃ တွေ အများဆုံးဖြစ်တယ်။ နံပါတ် (၃) ကိုသာ ခွဲပေးရတာများပါတယ်။ နို့နာတဆိုတာလဲ တခြားနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့အနာလိုပါဘဲ။
(၁) Fibrocystic breast changes ဆိုတာ ကုစရာမလိုပါ။ နာတာရောင်တာအတွက် အနေရခက်ရင် အနာ-အကိုက် သက်သာဆေးသောက်နိုင်ပါတယ်။
(၂) Simple cysts ဆိုရင် ဆေးထိုးအပ်သုံးပြီး စုပ်ထုတ်နိုင်တယ်။ ကင်ဆာမဟုတ်တာသေခြာဘို့လုပ်တာလည်း ဒီလိုမျိုး လုပ်တာပါဘဲ။
(၃) Fibroadenomas နဲ့ Intraductal papillomas တွေကို ခွဲစိတ်ကုသရမယ်။ Lumpectomy အကျိတ်ခွဲထုတ်နည်းက သမားရိုးကျနည်းဖြစ်တယ်။ Laser ablation, Cryoablation တခြားနည်းတွေလဲ ခုခေတ်မှာ စမ်းသုံးပါတယ်။
(၄) Mastitis နို့နာကို အပူကပ်ရေးရမယ်။ ပိုးသေဆေး နဲ့ အနာသက်သာဆေးပေးပြီး ပြည်တည်ရင်တော့ ပြည်က်ိုခွဲစိတ်နည်းနဲ့ထုတ်ရမယ်။
(၁) ဆရာ သမီးက ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတာ ၃ ခါရှိပါပြီ။ အကြိုနေ့ညကမှ ပျက်ကျလို့ ဆေးရုံမှာ သားအိမ်ခြစ်ထားပါတယ်။ ကလေးပျက်ကျတာများလို့ စိတ်လဲထိခိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ထပ် ကလေးအတွက် ဘယ်လို ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမျိုး လုပ်ထားရမလဲဆိုတာ ရိုသေလေးစားစွာဖြင့် ဆရာကိုမေးတာပါ။ သမီးက အသက် ၃၇ ရှိပြီမို့ ကလေးပိုလိုချင်တာပါ။ အမျိုးသားနဲ့ အသက်ရွယ်တူတွေပါ။ အသက် ၃၅ မှ အိမ်ထောင်ပြုထားထာပါ။
(၂) ကျွန်တော့် အမျိုးသမီးက ၄ လကို ၁ ရက်မစွန်းပါဘူးဆရာ။ ၆ ကြိမ်ရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်သက် ၈ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကိုယ်ဝန် ပျက်တာက သားအိမ်ချုပ်တာတောင် မရဘူး။
ကိုယ်ဝန်ရတိုင်း ကလေးအကောင်းမမွေးတတ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ပျက်တာကို ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် မသိလိုက်သူတွေလဲ မနည်းပါ။ ဘာလို့ အဲလို အလိုလိုပျက်သလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းတရားတွေက များတယ်။ တခါပျက်ပြီး နောက်ကိုယ်ဝန် အောင်မြင်ချင်လို့ မေးလာသူလဲ မနည်းပါ။
Miscarriage ဆိုတာ ကိုယ်ဝန် ၁၂ ပါတ်အတွင်း အလိုလိုပျက်ကျတာကို သတ်မှတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်မှန်သမျှရဲ့ ၁၅% လောက်ပျက်တယ်။ ၇၅% က ကိုယ်ဝန် ၁၂ ပါတ်အတွင်းမှာ ပျက်တယ်။ ကိုယ်ဝန် ရှိ-မရှိကို hCG အချင်းဟော်မုန်း စစ်ရတယ်။ အပေါင်းပြရင် ဆေးစာအရ Chemical Pregnancy ဓါတုနည်းနဲ့သေချာတဲ့ ကိုယ်ဝန်လို့ခေါ်တယ်။ (အာလ်ထွာဆောင်း) နဲ့ စစ်လို့ရလာရင်တော့ Clinical pregnancy ဆေးခန်းအတည်ပြု ကိုယ်ဝန်လို့ သတ်မှတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်တာ အများစုက ဒီနောက်အဆင့်က ဖြစ်တယ်။
• Genetic (Chromosomal) အသက်ကြီးသူတွေမှာ ဒါမျိုးကို ပိုတွေ့ရတယ်။ ၄၂ နှစ်ကျော်ရင် ၂ ဆဖြစ်တယ်။ ၆ဝ%က မျိုးဗီဇချို့ယွင်းလို့ဖြစ်တယ်။ မျိုးဗီဇအခြေခံကြောင့်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်လဲ မတတ်နိုင်ပါ။
• Uterine abnormalities သားအိမ်ကချို့ယွင်းတာထဲမှာ မွေးရာပါ သားအိမ်အခန်း ၂ ခုဖြစ်နေတာ၊ သားအိမ် နှစ်ခုတွဲ ဖြစ်နေတာတွေအပြင် Fibroid tumors သားအိမ်အလုံးက နေရာမတော်တာမှာရှိနေခြင်းလဲပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ရမယ်။ Cervical incompetence သားအိမ်အဝ (ခေါင်း) မလုံသူဆိုရင် လစေ့တဲ့အထိ မတည်နိုင်လို့ ဆရာဝန်ကနေ ချုပ်ပြီးပြင်ပေးနိုင်တယ်။
• Medical conditions ကျန်းမာရေး အကြောင်းခံတွေထဲမှာ Diabetes mellitus ဆီးချို၊ Thrombophilia သွေးရောဂါနဲ့ Tyroid တိုက်ဖွိုက်ရောဂါတွေ ပါတယ်။ ဆီးချိုနဲ့ နှလုံးသွေးကြော ရောဂါတွေကို ထိန်းနေရမယ်။
• Immunological causes ခုခံအားချို့ယွင်းမှုထဲမှာ Antiphopholipid Antibody Syndrome, Reproductive Autoimmune Failure Syndrome တွေပါတယ်။ ခဏခဏကိုယ်ဝန်ပျက်သူဆိုရင် Immunological Issues စဉ်းစားရမယ်။
ကိုယ်ဝန်ပျက်တာထဲမှာ အများဆုံးဖြစ်တဲ့ ရာသီခွင်ကို Luteal Phase ခေါ်တယ်။ ရာသီလာပြီးနောက် မျိုးဥ မထွက်ခင် ကာလကို ခေါ်တယ်။ အဲဒီကာလမှာ ချို့ယွင်းရင် ခဏခဏကိုယ်ဝန်ပျက်တတ်တယ်။ ဒီကာလအတွင်းမှာ အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီးဖြစ်လာတယ်။
• Follicle stimulating hormone ထွက်လာမယ်။ မျိုးဥအိမ်ထဲက အကောင်းဆုံး Follicle (ဖေါ်လီကယ်) တခုကိုရွေ့းပြီး မျိုဥထွက်ဘို့ ပြင်တင်တော့မယ်။
• Luteinizing hormone ကနေ မျိုးဥထွက်ဘို့ နိုးဆွပေးမယ်။
• Corpus luteum ဆိုတာဖြစ်လာမယ်။ သူကနေ Progesterone ဟော်မုန်းထုတ်ပေးပေးမယ်။
• ဒီကာလက ၁၄ ရက်ကြာတယ်။
• Progesterone နဲ့ Estrogen တွဲပြီး သာအိမ်နအတွင်းဆုံးနံရံ Endometrium ကိုပြင်ပေးကြမယ်။
• ဒါမှသာ Embryo သန္ဓေသားက Implantation တွယ်ကပ်မှုဖြစ်စေနိုင်တယ်။
ဒီဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မှာ ချို့ယွင်ရင် ကိုယ်ဝန်ပျက်တာကို LPD လို့ခေါ်တယ်။ သွေးစစ်ပြီး သိနိုင်တယ်။ မျိုးဥထွက်ပြီး ၇ ရက်မှာ စမ်းရင် 10-14 ng/mL နည်းနေတာရှိသူကို Luteal phase defect လို့ခေါ်တယ်။ Endometrial biopsy သားအိမ် အတွင်းဆုံးလွှာ အသားစဖြစ်ယူစစ်တာလဲလုပ်နိုင်တယ်။ Ultrasound အာလ်ထွာဆောင်းရိုက်ပြီး (ဖေါ်လီကယ်) ကို တိုင်းနိုင်တယ်။ သေးနေတယ်သူတွေကို Clomiphene Citrate (Clomid, Milophene or Serophene) မျိုးဥကြွေဆေး ပေးရမယ်။ LPD ဖြစ်နေသူကို Progesterone (Crinone or Prometrium) ဟော်မုန်းဆေးပေးမယ်။ မျိုးဥ ထွက်ချိန်ကနေ ကိုယ်ဝန် ၁ဝ-၁၂ ပါတ်အထိ ဆေးပေးတယ်။ တခါမက ပျက်သူဆိုရင် လိုမှာအမှန်ဘဲ။
ကိုဝန်မပျက်အောင် ကိုယ်ဝန်မရခင်ကတည်းကနေ စသင့်တယ်။ ကျန်းမာရေး ကောင်းနေသူတွေ ကိုယ်ဝန်ပျက်ရတာ နည်းတယ်။ ဒါကြောင့် အစာအာဟာရ မျှတလုံလောက်အောင်စားတာနဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု (လေ့ကျင့်ခန်း) လုပ်တာက အခြေခံလိုအပ်ချက် ဖြစ်တယ်။ စိတ်ဖိအားမများစေဘို့လဲ (ဖေါလစ်အက်စစ်) သောက်ဘို့ လိုပါမယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစား ပြင်းထံတာကိုလဲ ရှောင်ရမယ်။ ဓါတ်မှန် အရိုက်မခံပါနဲ့။ OG နဲ့အပ်ထားရမယ်။ အရက်၊ ဆေးလိပ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ရှောင်ရှာပြီး၊ (ကေဖင်း) များတာ (ကော်ဖီနဲ့ ကိုလာ) လျှော့သောက်ရပါတော့မယ်။
Recurrent miscarriage ကိုယ်ဝန် ခဏခဏပျက်ရခြင်း
• University of Warwick (ဝါးဝစ်) တက္ကသိုလ်က သုတေသီတွေက တွေ့ရှိချက်သစ်တခုကို ၁၂-၉-၂ဝ၁၃ နေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
• Steroids (စတီရွိုက်) နည်းနေသူတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ခဏခဏပျက်ရတယ်။
• ကိုယ်ဝန်ဆောင်အရေအတွက် ၇ ယောက်မှာ ၁ ယောက်မက Miscarriage ပျက်ကျတယ်။ အင်္ဂလန်မှာ ကိုယ်ဝန် ၃ ကြိမ်ပျက်ဘူးသူ ၁% ရှိနေတယ်။
• ကိုယ်ဝန်ပျက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သားအိမ်မှာ ခုခံအားစန်စ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ NK cells တွေ ပိုများနေတာကို သိလာရတယ်။
• Steroids ဆေးပေးရင် ကိုယ်ဝန်ပျက်တာကို သက်သာစေတာကိုသိထားပေမဲ့ အရင်က ဘာလို့လဲဆိုတာ မရှင်းတတ်သေးဘူး။
• ၁၂-၉-၂ဝ၁၃ နေ့ Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ထဲမှာ ရေးလိုက်တာကတော့ Natural killer cells (NK cells) တွေကနေ သားအိမ် အတွင်းဆုံးလွှာမှာ ဆက်ဖြစ်တာတွေရှိတယ်။
• Steroid levels နည်းနေရင် သန္ခေကို သားအိမ်မှာလာတွယ်ကပ်ဘို့ ခက်ခဲစေတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန် မပျက်စေအောင် (စတီရွိုက်) နည်းနည်းပေးတာ အကျိုးများတယ်။
Prednisolone 25mg ကို လလယ်ရက် (၁၁-၁၄ မြောက်ရက်) ကနေစပြီး ကိုယ်ဝန်ရတယ်ဆိုရင် ၁၂ ပါတ်အထိပေးတယ်။ ဆေးရဲ့ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး မများလှပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်တက်မယ်၊ စိတ်မူပြောင်းနိုင်တယ်၊ အိပ်ရေးပျက်နိုင်တယ်၊ အရေပြား နဲနဲအပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်တယ်၊ သွေးဖိအား တက်နိုင်တယ်။ ဆေးကကလေးဆီကို နဲနဲလေးသာရောက်မယ်။
- ကိုယ်ဝန်ရရင် Prednisolone ဆေးကို ၂ ဆတိုးပြီးပေးတယ်။
- Progesterone ဆေးကို မျိုးဥထွက်ပြီး ၄ ရက်မှပေးသေးတယ်။
- Low molecular weight Heparin or Lovenox ထိုးဆေးကို ကိုယ်ဝန်ရလာရင် ထိုးပေးတာလဲရှိတယ်။
- Low dose Aspirin ကိုလဲပေးတယ်။
- Folic acid သောက်ရမယ်။
1. Cervical length ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ သားအိမ်လည်ပင်းအရှည် http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2013/11/cervical-length.html
2. Cervical incompetence သားအိမ်အဝမလုံခြင်း http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2014/04/cervical-incompetence.html
3. Miscarriage Prevention ကိုယ်ဝန်မပျက်အောင် http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2013/08/miscarriage-prevention.html
4. Miscarriage ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်းတမျိုး http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/miscarriage.html
5. Recurrent miscarriage ကိုယ်ဝန် ခဏခဏပျက်ရခြင်း http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2013/09/recurrent-miscarriage.html
သင်္ကြန်တွင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှု နည်းပါး
၂၀၂၄ အတာသင်္ကြန်ပွဲကို ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲကြစဉ်။ (ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၁၄)
မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန် ရေသဘင်ပွဲတော်ကာလအတွင်း ဒီကနေ့ သင်္ကြန်အကျနေ့အထိတော့ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာ၊ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားတာတွေက အရင်နှစ်တွေကထက်ယှဉ်ရင် အတော်လေးလျော့ပါးတယ်လို့ လုံခြုံရေးနဲ့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး တာဝန်ခံတွေက ပြောပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ ရိုးရာသင်္ကြန်ပွဲတော် ဆင်နွှဲလာကြသူတွေ လုံခြုံရေးအတွက် လုံခြုံရေးနဲ့ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲရေး အဖွဲ့တွေဖွဲ့ပေးထားပြီး မြို့နယ်အနှံ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ နေရာချထား ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်သင်္ကြန်ပွဲတော်တွင်း မြန်မာ့ရိုးရာသံချပ် ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ ထူးထူးခြားခြား ဖျော်ဖြေမှုတွေကို ပရိတ်သတ်က စိတ်ဝင်စားသလို ရေကစားသူအချင်းချင်း ခိုက်ရန်မဖြစ်ပွားရေး ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော် နောက်ဆုံးရ သတင်းတွေကို မဆုမွန်က စုစည်းတင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒီကနေ့ကတော့ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်နေ့ ၁၅ ရက်၊ မဟာသင်္ကြန်အကျနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံးအနှံ့ မြန်မာ့ရိုးရာ အတာရေသဘင်ပွဲတော်ကို ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ဆင်နွှဲနေကြချိန်မှာ ရေကစားသူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် လုံခြုံရေးအတွက် ရေသဘင်ပွဲတော် ကာလအတွက် အထူးလုံခြုံရေးနဲ့စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့တွေ ဖွဲ့စည်းပြီး လုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးနေကြသလို ရေကစားသူပြည်သူတွေဘက်ကလည်း လုံခြုံရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ နှိုးဆော် သတိပေးထားတယ်လို့ လုံခြုံရေးတာဝန်ခံတွေက ဆိုပါတယ်။ သင်္ကြန်ပွဲတော်တွင်း ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကို ဆပ်ကော်မတီ ကွပ်ကဲမှု တာဝန်ခံတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ တာမွေမြို့နယ်မြို့မရဲစခန်းမှူးဦးဝင်းအောင်နီက ဗွီအိုအေကို အခုလိုပြောပြပါတယ်။
“မဏ္ဍပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်း မနက်တစ်ခါ၊ ညနေတစ်ခါ မဏ္ဍပ်မစခင် မနက် ၆ နာရီ၊ ညနေ ၆ နာရီပြီးတဲ့အခါမှာ မိုင်းရှာတဲ့အဖွဲ့၊ မဏ္ဍပ်တိုင်းမှာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့၊ လိုအပ်လို့ရှိရင် ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ ထိန်းသိမ်းမယ့်အဖွဲ့၊ အဖွဲ့ပေါင်းစုံပေါ့- တိုင်းနဲ့ ခရိုင်ထိုင် မြို့နယ်တွေအကုန်လုံးမှာ သူ့အဖွဲ့နဲ့သူတွေကို လုံခြုံရေးအဖွဲ့ သီးခြားဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်း သူ့နေရာနဲ့သူ စောင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မြို့နယ်တိုင်းမှာ ပုံမှန်ထက်ကို ပိုပြီး လှည့်ကင်းတွေ ဆောင်ရွက်ပေးတယ်လေ။”
မဏ္ဍပ်အတွင်း စစ်ဆေးမှုတွေ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်ဆောင်နေသလို မြို့နယ်အနှံ့ လုံခြုံရေးတွေ တိုးမြှင့်နေရာချထားတဲ့အတွက် သင်္ကြန်အကျနေ့အထိတော့ ရေသဘင်ပွဲတော်အတွင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှု၊ မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေ နည်းပါးနေတယ်လို့လည်း စခန်းမှူးကပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းမှာတော့ တိုင်းတပ်ဖွဲ့မှူးအစီအစဉ်နဲ့ မြို့နယ်တွေတိုင်းမှာ နယ်ထိန်းတွေတောင်မှ ကိုယ့်ရပ်ကွက်ထဲမှာကိုယ် visiting card ပုံစံမျိုးပေါ့နော်၊ အားလုံးကို ဖုန်းနံပါတ်တွေ ဘာတွေနဲ့ တခါတည်း လိုအပ်တဲ့သတင်းပေးချင်ရင် အချိန်မရွေးပေးပါဆိုပြီး ဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပြီး အကုန်လုံး မြို့နယ်တိုင်း၊ ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ ကျနော်တို့က အနှံ့ဖြန့်ထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ကဒ်ပြားတွေမှာရှိတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေဟာ အကုန်လုံး တော်တော်များများလက်ထဲမှာရောက်ပြီးတော့ အကူအညီတောင်းနိုင်တဲ့အတွက် အခုတော့ မြို့နယ်တိုင်းမှာလည်း မဏ္ဍပ်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း လိုအပ်တဲ့ မှုခင်းကျဆင်းရေး၊ သရုပ်ပျက်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမရှိရေး ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေရိုက်တယ်၊ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကအစ အရပ်ဝတ်နဲ့လှည့်ပတ်ပြီး ကြည့်တဲ့အခါမှာ တကယ်လည်းလုပ်နေပါလား၊ တကယ်လည်းရှိပါလားဆိုတဲ့အခါမှာ ထိန်းသိမ်းတာလည်းပါတယ်။ ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်က အသိတရားနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့လည်း ပါတာပေါ့။ ကျနော့်နယ်မြေမှာတော့ ဒီနေ့အထိကို ဘာတစ်မှုမှ မရှိသေးဘူး။”
မြန်မာနှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်ပွဲတော်တွင်းမှာလည်း သင်္ကြန်တွင်း ရေကစားသူအချင်းချင်း အမုန်းပွား၊ ရန်မများစေဘဲနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစေဖို့အရေး သင်္ကြန်ပန်းအထိမ်းအမှတ် ပိတောက်ပန်းခက်အဝါလေးတွေနဲ့ ပန်းစကား အထိမ်းအမှတ်သင်္ကေတတွေကို သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်တွေနဲ့ လူစည်ကားရာ နေရာတွေမှာ လိုက်လံဝေဌတဲ့ ပန်းစကားငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့အထိ လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပန်းစကားဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူ ကိုနေဘုန်းလတ်က ပြောပါတယ်။
“အမုန်းစကားတွေပေါ့နော်၊ ပြီးတော့ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့စကားတွေ၊ အဲဒီဟာတွေကို မဖြစ်အောင် အဓိကရည်ရွယ်ပြီး ပန်းစကားလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်တာပေါ့။ ဒီနေ့ သင်္ကြန်တွင်းမှာတော့ စတေကာတွေလည်း လိုက်ကပ်တယ်၊ ဘနိုင်းတွေ၊ ၃ ပေ၊ ၄ ပေ လုပ်ထားတယ်။ အဲဒါတွေကို ကားလေးတွေပေါ် ချိတ်တယ်။ ပြီးတဲ့အခါကျတော့ လက်ပတ်လေးတွေ လုပ်ထားတာပေါ့နော်။ လက်ပတ်လေးတွေကျတော့ ဘနိုင်းချိတ်ပေးတဲ့ ကားတွေကို လိုက်ဝေတယ်။ လူသားအချင်းချင်း အမုန်းမပွားဖို့၊ ငါတို့နှုတ်ကို စောင့်စည်းစို့- ဆိုတဲ့ အဲဒီဆောင်ပုဒ်ကိုပဲ ဘေးကနေပြီးတော့ ဘနိုင်းတွေကို လိုက်ကပ်တာ။ နှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့ကျရင်တော့ ဘုရားတွေပေါ်မှာ စတေကာတွေ လိုက်ဝေအုံးမယ်။”
သင်္ကြန်ပွဲတော်အတွင်း ဒီနှစ်မှာတော့ မြန်မာ့ရိုးရာသံချပ်အဖွဲ့တွေ ထူးထူးခြားခြား ပေါ်ထွက်လာပြီး အများပြည်သူ ရေပက်ကစားကြတဲ့ ရေကစားမဏ္ဍပ်တွေကို လိုက်လံဖျော်ဖြေကြတာ ရှိသလို ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ရုံးတွေ၊ နေအိမ်တွေမှာလည်း လိုက်လံဖျော်ဖြေမှုတွေရှိပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာသံချပ်တွေမှာ လက်ရှိမြန်မာပြည်သူတွေ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းက အမြီးအမောက်မတည့်တဲ့ လွဲချော်မှုတွေကိုစပ်ထားတဲ့ သံချပ်တွေကို ပြည်သူလူထုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့လည်း ရိုးရာသံချပ်ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များအစည်းအရုံးက ကိုညွန့်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့၊ ကျနော်တို့ မနက်က မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်က ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းတို့အိမ်ရှေ့မှာ သွားထိုးပါတယ်။ ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှု ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ လူစည်ကားရာအရပ်ကလေးတွေမှာပေါ့နော်။ အများကလည်း ဒီအပေါ်မှာ အလှူတော်ငွေတွေလည်း ချကြပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာလည်း စိတ်ဝင်စားမှု ရှိကြပါတယ်။ မနှစ်ကနဲ့စာလို့ရှိရင် ဒီနှစ်ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာ ဒီနှစ် တော်တော်ကို စည်စည်ကားကားလေးတွေ တွေ့မြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒီနှစ်ကတော့ သံချပ်စိစစ်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ ကင်းလွတ်ခွင့်ပုံစံ ပေးထားတော့ သံချပ်တွေက လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖျော်ဖြေခွင့်တွေ ရပါတယ်ခင်ဗျ။ ဖျော်ဖြေခွင့်ရတော့ သံချပ်အဖွဲ့လေးတွေလည်း တော်တော် စုံစုံလင်လင် တွေ့မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျ။”
မဟာသင်္ကြန်အကြိုနေ့ကစလို့ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်အပါအဝင် မြို့ကြီးတွေမှာ ရေကစားမဏ္ဍပ်တွေနဲ့ ရေသဘင်ပွဲတော်ကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနေပြီး မြန်မာ့ရိုးရာ ရေသဘင်ပွဲတော်ကို လာရောက်ဆင်နွှဲတဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်တွေ လည်ပတ်မှုလည်း ပိုများလာတယ်လို့ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေက ဆိုပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့ ပြင်သစ် စံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂ နာရီလောက်မှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒီညနေပိုင်းမှာပဲ ပြင်သစ် သမ္မတ ဖရန်ဆွာ အော်လွန်းနဲ့ တွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာရော ဘာအစီအစဉ်တွေ ရှိပါသေးလဲ ဆိုတာကိုတော့ ပြင်သစ်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းက မခင်ဇင်မင်းက အခုလိုပြောပါတယ်။
“ဒီနေ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Program - သူတို့ပြောချက်အရ သမ္မတနဲ့တွေ့မှာက ဒီနေ့ညနေ ၆ နာရီ၊ ၄၀ မှာ တွေ့မယ်။ မနက်ဖြန်ကတော့ အစီအစဉ်တွေ များတယ်။ ဒေါ်စုက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့၊ သမ္မတနဲ့လည်းတွေ့မယ်လေ။ သမ္မတအိမ်တော်မှာ နောက်ပြီးတော့ သူက အဓိက-က ပြင်သစ်စစ်တပ်ရဲ့ မြင်းတပ်မတော်ပေါ့နော်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘုရင်ခံ အခမ်းအနားတွေ ဘာတွေကျရင် ပြင်သစ်က မြင်းတပ်မတော်ကို သုံးတုန်းပဲလေ။ အဲဒီကိုလည်း သူ သွားဖို့ရှိတယ်။ နောက် ပြင်သစ်ကဆို စစ်တပ်ရဲ့ သေနာပတိချုပ် အကြီးအကဲကြီးတွေနဲ့လည်း တွေ့ဖို့ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေ အကုန်လုံးကတော့ မနက်ဖြန်မှ တွေ့မှာ။
“အန်တီစုက လာတယ်ဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့ ပရိုဂရမ်တွေက အရမ်းကို ကြပ်နေတယ်။ ကြပ်နေတဲ့အခါကျတော့ သူက ဘာပြောသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ အစကတော့ တွေ့ချင်တယ်ပေါ့နော်။ မြန်မာတွေနဲ့လည်း အမှတ်တရ နှုတ်ဆက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ သူက ဘယ်လိုမှကို မတွေ့ဖြစ်ဘူး-တဲ့။ ပြီးတော့ သူက ချက်ခြင်းပဲ ၁၆ ရက်နေ့ကို ပြန်မယ်။ ပြန်မယ်ဆိုတော့ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆ - သုံးရက်လို့ ပြောပေမယ့် တကယ်တန်း သူရတာကတော့ ၁ ရက်ပဲ ရတယ်။”
ပြင်သစ်အခြေစိုက် မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းက မခင်ဇင်မင်း ပြောပြပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ဂျီးရီးယား ပေါက်ကွဲမှု အနည်းဆုံး ၇၁ ဦး သေ
ဆရာခင်ဗျား ကျွန်တော့ အမျိုးသမီး ကိုယ်ဝန် ၃၄ ပတ်ပါ။ အဲဒါ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ရေမွှာရေက scan ရိုက်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ် ကတောင် ၁ဝ အထိကို ရေနည်းတယ် ပြောတယ်။ဒီနေ့ပြန်ရိုက်တော့ ၉ ပဲရှိတယ်။ ရေမွှာရေနဲတယ်လို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့က့့ မှာပါ။ ဆရာဝန် ပြောတာလဲသိပ်နားမလည်ဘူး။ ရေနည်းတာဟာ စိုးရိမ်ရလားဆရာ။ ပုံမှန်အထိရောက်အောင် ဘာတွေစားပေးလုပ်ပေးရမလဲဆရာ။ အဲလိုရေနည်း ရင် စောမွေးတာတို့ ခွဲမွေးရတာတို့ ဖြစ်တတ်လားဆရာ။ ကလေးကိုရော မိခင်ကိုရောဘာတွေထိခိုက်စေပါသလဲဆရာ။ ဘာတွေ သီးသန့် ဂရုစိုက်စရာလိုလဲဆရာ။
ခုတလော ဆေးခန်းလေးမှာ ရေမြွှာရည် များနေတာတယောက်နဲ့ နည်းနေတာတယောက် ကိုယ်ဝန်အပ်ထားတာ ရှိတယ်။ Amniotic fluid ရေမြွှာရည် ပုံမှန်ထက် နည်းနေတာကို Oligohydramnios ခေါ်ပြီး၊ ပုံမှန်ထက် များနေတာကို Hydramnios နဲ့ Polyhydramnios လို့ ခေါ်တယ်။
ကိုယ်ဝန် ၁၂ ပတ်မှာ Amniotic sac ရေမြွာအိတ်ဖြစ်လာတဲ့နောက် Amniotic fluid ရေမြွာရည်လဲ ဖြစ်လာတယ်။ အစပိုင်းမှာ မအေဆီကနေရတဲ့ရေကနေ ရေမြွှာရည်ဖြစ်လာတယ်။ ကိုယ်ဝန် ၂ဝ ပတ်နောက်ပိုင်းမှာ ကလေးရဲ့ ဆီးပါရောလာတယ်။ ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်မှာ ရေမြွာရည်ဟာ ၈ဝဝ စီစီကနေ ၁ဝဝဝ အထိရှိတယ်။ ၃၆ ပါတ်နောက် မွေးကာနီးရင် နဲနဲ နည်းလာတယ်။ ကိုယ်ဝန် ၃၂-၃၆ ပတ်မှာ အရည်ထုထည် 500 စီစီထက် နည်းနေတာကို ရေမြွှာရည်နည်းတယ်လို့ ခေါ်တယ်။ ကိုယ်ဝန် ၈% မှာ ရေမြွာရည် နည်းနေတတ်ပြီး၊ ၄% က Oligohydramnios အထိရောက်တယ်။ ကိုယ်ဝန် နောက်ဆုံး ၃ လမှာ အဖြစ်များတယ်။ ၁၂% က ရက်နောက်ကျပြီးမှ မွေးကြတယ်။ ကိုယ်ဝန်လစေ့ဆိုတာ ၃၉ ပတ်ကနေ ၄၁ ပတ်အထိကို ခေါ်တယ်။ ၄၂ ပတ်ကျော်သွားတာကို ရက်နောက်ကျမှ မွေးတာလို့ ခေါ်တယ်။
- ဗိုက်စမ်းကြည့်ရင် သားအိမ်အမြင့်က ရှိသင့်တာထက် နိမ့်နေမယ်။
- အထဲကကလေး အနေအထား တမျိုး ဖြစ်ချင် ဖြစ်နေမယ်။
- အပြင်ကနေစမ်းရင် ကလေးရဲ့ ခြေ-လက်စတာတွေက ပိုပြီးသိသာနေမယ်။
- (အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်ပြီး Amniotic fluid index (AFI) တိုင်းရင်5to6cm ထက်နည်းနေမယ်။
- Maximum vertical pocket (MPV) ကိုလဲ တိုင်းမယ်။ MPV ဆိုတာ သားအိမ်ထဲက အနက်ဆုံးနေရာမှာ ရေမြွှာရည်တိုင်းတယ်။2cm ထက်နည်းနေရင် ဒီရောဂါဘဲ။
မသိတာကများတယ်။ များသောအားဖြင့် အထဲကကလေးရဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းစနစ် ချို့ယွင်းနေတာမို့ ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ Bilateral renal agenesis (Potter's syndrome), Polycystic kidneys, Genitourinary obstruction တခုခု ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ Uteroplacental insufficiency ကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်တယ်။ မိခင်လောင်းက ရေဓါတ် နည်းနေလို့လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Angiotensin converting enzyme inhibitors ဆေးသောက်ရလို့လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မိခင်မှာ သွေးတိုးနဲ့ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်ကတည်းက ဆီးချိုရှိနေတာ၊ PET ကိုယ်ဝန်သွေးဆိပ်တက်တာ၊ သွေးတိုကျဆေး တချို့ကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ PROM ရေမြွာ စောပေါက်မယ်ဆိုရင် နည်းနေတော့မယ်။
ရေမြွာရည်နည်းတာကို ကိုယ်ဝန် ပဌမတဝက်မှာဖြစ်ရင်
1. Birth defects မွေးရာပါချို့ယွင်းတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ Facial distortion, Clubfoot, Pulmonary hypoplasia နဲ့ Amnion nodosum တခုခုဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ Potter syndrome ခေါ်တာဖြစ်မယ်။
2. Miscarriage ကိုယ်ဝန်ပျက်ဘို့ Stillbirth ကလေး အသေမွေးဘို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများတယ်။
ရေမြွာရည်နည်းတာကို ကိုယ်ဝန် ဒုတိယတဝက်မှာဖြစ်ရင်
1. Intrauterine Growth Restriction (IUGR) ကလေးဖွံ့ထွားမှု နည်းတာ၊
2. Preterm birth ကလေးစောမွေးတာ
3. Cord compression ချက်ကြိုးဖိခံရတာ၊
4. Meconium stained fluid ရေမြွာရည်နောက်ကျိတာ နဲ့
5. Cesarean delivery ဗိုက်ခွဲမွေးရတာတွေ ကြုံရတတ်တယ်။
- ကိုယ်ဝန်နုသေးရင် စောင်ကြည့်စစ်ဆေးတာကိုသာ လုပ်မယ်။
- ကိုယ်ဝန် တတိယပတ်ထဲရောက်မှ ဖြစ်တာဆိုရင် ကလေးဖွံ့ထွားမှု နှေးနိုင်တယ်။
- စောစောကတည်းကဆိုရင် မိခင်လောင်းကို ရေဓါတ်၊ ဆားဓါတ် ဖြည့်ပေးမယ်။ ရေ-အရည် များများ သောက်စေရမယ်။
- မွေးကာနီးဆိုရင် Amniocentesis လုပ်ပြီး Injection of fluid ဆားရည်သွင်းပေးနိုင်တယ်။
- ကလေး ဖွါးနေတုံးမှာ ဆိုရင် ချက်ကြိုးကို အညှစ်ခံရလို့ ကလေးမှာ အောက်စီဂျင် အလုံအလောက်မရ ဖြစ်မယ်။ Intrauterine catheter ပိုက်ငယ်လေးနဲ့ Amnio-infusion ဆားရည် သွင်းပေးနိုင်တယ်။ စိတ်ချရမှုကိုတော့ ငြင်းခုံနေဆဲဖြစ်တယ်။
- စောမွေးပေးရတာလဲ ရှိတတ်တယ်။
- ဗိုက်ခွဲမွေးရလမ်း ရှိတယ်။
အန်ဖီးလ်တွင် မန်ချက်စတာစီးတီးကို အနိုင်ယူပြီး ချန်ပီယံဆုနှင့် နီးစပ်သွားခဲ့သည့် လီဗာပူးလ်
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် (၃၄) လီဗာပူးလ်နှင့် မန်ချက်စတာစီးတီး ပွဲစဉ်တွင် အိမ်ရှင် လီဗာပူးလ်က ၃-၂ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိသွားခဲ့သည်။
လီဗာပူးလ်တွင် မစ်ဂ်နိုလတ်၊ ဂျွန်ဆင်၊ ဖလာနာဂန်၊ ဆာခို၊ စကာတယ်၊ ဂျရတ်၊ ဟန်ဒါဆန်၊ ကော်တင်ဟို၊ စတာလင်၊ ဆွာရက်ဇ်၊ စတားရစ်ခ်ျတို့ ပါဝင်ကစားခဲ့သည်။
မန်ချက်စတာစီးတီးတွင် ဟတ်၊ ဇာဘလက်တာ၊ ကွန်ပနီ၊ ဒီမစ်ချယ်လစ်၊ ကလစ်ချီ၊ တိုရေး၊ ဖာနန်ဒင်ဟို၊ နာဗက်စ်၊ နာဆရီ၊ ဆေးလ်ဗား၊ ဒီဇီကိုတို့ ပွဲထွက်ပါဝင်ခဲ့သည်။
ပွဲချိန် ၅ မိနစ်တွင် ဒီမစ်ချယ်လစ်ကို ဖျက်ထုတ်ပုံကြမ်းခဲ့သည့် ဆွာရက်ဇ် အဝါကတ်ပြသခံရသည်။ ၆ မိနစ်တွင် လီဗာပူးလ်က အဖွင့်ဂိုး ရရှိသွားခဲ့ပြီး အဆိုပါဂိုးကို ဆွာရက်ဇ် ပေးပို့သည့် ဘောလုံးမှတစ်ဆင့် စတာလင်က ကွန်ပနီနှင့် ဂျိုးဟတ်ကို ခြေယောင်ပြကာ ကန်သွင်းယူခဲ့သည်။ ၁၅ မိနစ်တွင် စတာလင် ပေးပို့သည့် ဘောလုံးကို စတားရစ်ခ်ျ ပိတ်သွင်းသော်လည်း ဂိုးဘေးထွက်ခဲ့သည်။ ၂၆ မိနစ်တွင် တန်ပြန်တိုက်စစ်မှ တစ်ဆင့် ရရှိခဲ့သည့် ထောင့်ကန်ဘောကို ဂျရတ်ကန်တင်ရာမှ စကာတယ်က ခေါင်းတိုက်သွင်းပြီး လီဗာပူးလ် အတွက် ဒုတိယဂိုး ရယူခဲ့သည်။
ဒုတိယပိုင်းတွင် နာဗက်စ်အစား ဂျိမ်းစ်မီလ်နာ ဝင်ရောက်လာပြီးနောက် မန်စီးတီး ကစားပုံ ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီး ချေပဂိုးများ ရရှိခဲ့သည်။ ၅၇ မိနစ်တွင် မီလ်နာ၏ ကြိုးပမ်းမှုမှတစ်ဆင့် ဆေးလ်ဗားက ပထမ ချေပဂိုး သွင်းယူခဲ့သည်။ ၆၂ မိနစ်တွင် ဘယ်ခြမ်းမှ ဆေးလ်ဗား ထိုးပေးလိုက်သည့် ဘောလုံးက ဂျွန်ဆင်နှင့်ထိ၍ ဂိုးထဲဝင်သွားသဖြင့် မန်စီးတီး ဒုတိယ ချေပဂိုး ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် လီဗာပူးလ်က တိုက်စစ်ပြန်ဆင်လာခဲ့ပြီး ၇၈ မိနစ်တွင် လက်ပစ်ဘောကို ကွန်ပနီ ရှင်းထုတ်ပုံ မသေသပ်သောကြောင့် ရရှိသွားသည့် ဘောလုံးကို ကော်တင်ဟို အပြင်းကန်သွင်းရာမှ လီဗာပူးလ်က ဦးဆောင်ဂိုး ပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့သည်။ မိနစ် ၉၀ တွင် နာဆရီကို ဖျက်ထုတ်ပုံ ကြမ်းခဲ့သည့် ဟန်ဒါဆန် တိုက်ရိုက် အနီကတ်ဖြင့် ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း လီဗာပူးလ်က အနိုင်ရလဒ်ကို ထိန်းကစားသွားခဲ့ပြီး ပွဲအပြီးတွင် မန်ချက်စတာစီးတီးကို ၃-၂ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိသွားခဲ့သည်။
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ၊ ဖြူဖြူကျော်သိန်း ၊ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် ၊ လိမ္မော်သီး နှင့် ဘိုဘို တို့၏ သင်္ကြန်အကျနေ့ ဖက်ရှင်စတိုင်
ဧပြီ ၁၄ရက်တွင် ကျရောက်သည့်အင်္ကြန်အကျနေ့တွင် အနုပညာရှင်များဝတ်စား ဆင်ယင်ထားသည့် ဖက်ရှင်များသည် တစ်ဆင်သစ်လွင်ပြီး အမြင်ဆန်းစေသည့် ဖက်ရှင်များဖြစ်ကြသည်။
ယင်း ဖက်ရှင်များကို မြင်တွေ့ရသည့် မဏ္ဍာပ်သည် ရန်ကုန် ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းရှိ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်္ကြန်ပွဲ Grand Royal မဏ္ဍာပ်တွင် လာရောက်ဖျော်ဖြေကြခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်တွေထောင်ထဲတွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သူ ဦးမောင်သိန်းအသုဘနှင့် သမီးဖြစ်သူ ပေးပို့သော ကဗျာ
စစ်တွေထောင်ထဲတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းစဉ် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သူ ဦးမောင်သိန်း (၅၇) နှစ် အသုဘအား ယမန်နေ့က ရာနှင့်ချီသော ပြည်သူများက လိုက်လံ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
“ မနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီမှာ အသုဘချပါတယ်။ ရာနဲ့ချီတဲ့ လူထုက လိုက်လံပို့ဆောင်နုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်” ဟု သားကြီးဖြစ်သူ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ကိုနိုင်စိုးက ပြောသည်။
ဦးမောင်သိန်းသည် မတ်လ ၂၆ ရက်နှင့် ၂၇ ရက်နေ့များအတွင်း စစ်တွေရှိ နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုရုံးများ တိုက်ခိုက်ခံရမူနှင့် ဆက်စပ်ပြီး အခြားသူ (၁၁) ဦးနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရရသည်။ ဖမ်းဆီးခံရပြီး နောက်တစ်နေ့ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် သတိမေ့သွားပြီး စစ်တွေဆေးရုံသို့ အရေးပေါ်တင်ပို့ခဲ့ရသည်။
ဖခင်ဖြစ်သူ သေဆုံးသွားခြင်း အတွက် အလွန်ဝမ်းနည်း ပူဆွေးမိသော်လည်း သူ့အတွက် ဂုဏ်ယူကြောင်း ကိုနိုင်စိုးက ဆိုသည်။
“ ကျွန်တော်က အဖေသေဆုံးသွားတဲ့ အပေါ် ၀မ်းနည်းပါတယ်။ ၀မ်းနည်းပေမယ့် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ စစ်တွေ တစ်မြို့လုံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ခုလုံးက ကျွန်တော်ရဲ့ အဖေကို သူရဲကောင်း သဖွယ် သတ်မှတ်ပြီး အသုဘ လိုက်ပို့ကြပါတယ်။ ဒီအတွက် ကျွန်တော်အဖေ သေဆုံးသွားပေမယ့် ကျွန်တော်အဖေ ၀ိဥာဉ်ဟာ အခုထိ ရှိနေသလို ကျွန်တော် ခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော် အဖေ သေဆုံးသွားပေမယ့် အဖေဟာ ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ လေးစားပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဧပြီလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည့် ဦးမောင်သိန်း၏ အသုဘ အခမ်းအနားတွင် မလေးရှားတွင် ရောက်ရှိနေသူ သမီးကြီးဖြစ်သူ ခိုင်မျိုးလိူင်မှ ပေးပို့သော ကဗျာအား အသုဘတွင် ဖြန့်ဝေရာ အများပြည်သူများကို အလွန်စိတ်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသည်ဟု အသုဘ အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခဲ့သူ ဦးညွှန့်မောင်က ပြောသည်။
ယင်း ကဗျာအား သူက ယခုလို ရွှတ်ပြသည်။
ရခိုင်သူ ရခိုင်သားတိကို ခွဲလို့
မြင်ခွင့်၊ တွီခွင့် မရလိုက်ကေလဲ
ဘ၀ဆက်တိုင်းမှာ ပါပါသမီး ဖြစ်ရပါစီလို့
သားသမီး မိသားစု အပေါ်မှာတောင်မက
အသက်ကို ပီးဆပ်လားရေ ပါပါ
သမီးအတွက် ထာဝရ သူရဲကောင်း ဖခင်ပါ။
ပါပါ ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစီ။
ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်စဉ် လျှပ်စစ်ဓါတ်တိုင်များပေါ်သို့ပြုတ်ကျခဲ့၍ ဓါတ်တိုင်များ လဲကျပျက်စီး
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁၄
၁၄.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၃၁၀အချိန် ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ကျွန်းတောလမ်း၊ Junction Square ရှေ့တွင်စိုက်ထူထားသော အလျား
(၂၀)ပေ၊ အနံ(၁၅)ပေ၊ အလေးချိန်(၃)တန်ခန့်ရှိ Junction Square
များဖြစ်သည့် ယာဉ်မောင်း ကိုထွန်းနှင့် ၀န်ချီစက်ကြိုးချိတ်လုပ်သား
မော်တာလေး(ခ)မျိုးမြင့်အောင်တို့မှ ၆ဂ/---- ကရိန်းယာဉ်ဖြင့် ကြိုးချိတ်ပြီး မူလီ(၄)လုံးအနက် (၁)လုံးအားဖြုတ်၍ ကြိုးတင်းစဉ် ဆိုင်းဘုတ်မှာ
၎င်းဆိုင်းဘုတ်ပြုတ်ကျစဉ် လမ်းဘေးရှိ လျှပ်စစ်ဓါတ်တိုင်ပေါ်သို့ကျခဲ့ရာ ဓါတ်တိုင်(၉)တိုင်လဲကျပျက်စီး သွားခဲ့သဖြင့် Junction Square တာဝန်ခံ
ဒေါ်မိုးမိုးအေးမှ မြို့နယ်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးအဖွဲ့သို့ အကြောင်း ကြားကာ ပြန်လည်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ပေါ့လျော့စွာပြုလုပ်ခဲ့၍ ဆိုင်းဘုတ်ပြုတ်ကျပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်တိုင်
များလဲကျပျက်စီးခဲ့သဖြင့် အရေးယူသွားရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ယာဉ်မောင်းအိပ်ငိုက်၍ လမ်းလယ်ကျွန်းကပ်တုံးများအား တိုက်မိ
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက် ၄ နာရီခွဲအချိန် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၁၆၈/၀-၁)ကြားတွင် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းအရ သာဂရအမြန်လမ်း ရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် သက်သေများနှင့်အတူ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ စစ်ဆေးချက်အရ ရန်ကုန်မှမန္တလေးသို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုလဲမြို့နယ်၊ သာယာကုန်းရွာနေ မျိုးမြင့်ဟိန်း(ခ)စိုးစိုး(၂၆)နှစ်မောင်းနှင်လာသည့် ၈ည/xxxx မန်းရွှေမြို့တော်ခရီးသည်တင် ဖြူမီးခိုးကြားရောင်မှန်လုံယာဉ်သည် ယာဉ်မောင်းအိပ်ငိုက်၍ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းလယ်ကျွန်းကပ်တုံးများအား ၀င်ရောက်တိုက်မိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ ထိုသို့တိုက်မိမှုကြောင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ ဇီးကျေးရွာနေ ယာဉ်နောက်လိုက် ရဲမျိုးအောင်(၂၃)နှစ်မှာ ယာဉ်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျပြီး ကပ်ပယ်အိတ် ဖူးရောင်ဒဏ်ရာရရှိကာ အခင်းဖြစ်နေရာတွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးယာဉ်မှာ ရှေ့လေကာမှန်ကွဲ၊ ရှေ့ခေါင်းပိုင်းကြေမွ၊ ၀ဲရှေ့ဘီးကျွတ်၊ တန်ဘိုးငွေကျပ်သိန်း(၂၀)ခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သောကြောင့် မျိုးမြင့်ဟိန်း(ခ)စိုးစိုးအား သာဂရအမြန်လမ်း ရဲစခန်း ယာဉ်(ပ)၈/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၄-က ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
၁၄.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၁၀၀ အချိန်တွင် ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်နေ ကိုမောင်မောင်တင်မှ ၎င်းသည် သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ လမ်းလျှောက်၍ သင်္ကြန်ရေပက်ခံထွက်လာစဉ် ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ သစ္စာလမ်းဆုံမီးပွိုင့်
အရောက် သင်္ကြန်ရေပက်ခံထွက်လာသော ယာဉ်အမှတ် ၇က/----ဟွန်ဒိုင်း အမျိုးအစား အဖြူ ရောင်ယာဉ်ပေါ်တွင်ပါလာသည့် လူငယ်များနှင့် စကားများ ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြကြောင်း၊ ထိုသို့ရန်ဖြစ်စဉ် ယာဉ်ပေါ်ပါလူငယ်များမှ ဓါးနှင့်ထိုး၊ တုတ်နှင့်ရိုက်ခဲ့ကြ၍ သူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသော ကိုစိုင်းမြင့်သူတွင် ၀ဲဘက်လက်ပြင်၌ ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ(၁)ချက်၊ ၀ဲဘက်ဒူးနာကျင်ဒဏ်ရာ (၁)ချက်၊ ကိုမင်းမင်းနှင့်ကိုအောင်ချိုတို့တွင် နာကျင်ဒဏ်ရာများအသီးသီး ရရှိခဲ့ကြသဖြင့် သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံကြီးတွင် အတွင်းလူနာ(မစိုးရိမ်ရ) များအဖြစ် တက်ရောက်ကုသခဲ့ရကြောင်းနှင့် ယင်းသို့ ကျူးလွန်ကြသူ ၇က/---- ယာဉ်ပေါ်ပါလူငယ်များကိုအရေးယူပေးရန် တိုင်တန်းလာခဲ့
တိုင်တန်းချက်အရ ရန်ကင်းမြို့မရဲစခန်း(ပ)၇၁/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၂၅/၃၂၆/၁၁၄ ဖြင့်အမှုဖွင့်ကာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင်ပါဝင်သူများဖြစ်သည့် တာမွေမြို့နယ်နေ မင်းဇင်လတ်၊ (၂၆)နှစ်၊ (ဘ)ဦးလှမြင့်နှင့် နေလင်းဇော်၊ (၂၈)နှစ်၊ (ဘ)ဦးလှမြင့်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်နေ ပြေငြိမ်း၊ (၂၇)နှစ်၊ (ဘ)ဦးခင်မောင်သိန်းတို့(၃)ဦးကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
၂၀၁၄ သင်္ကြန် Grand Royal မဏ္ဍပ်မှ ထိုင်းအကမယ်များ အားပေးနေသော ပရိတ်သက်များကို စီစဉ်သူဂျွန်လွင်ကိုယ်တိုင် ထွက်ပြီးပွဲထိန်းခဲ့ရ (ရုပ်၊သံ)
Grand Royal က ထိုင်းအကမယ်ကလေးတွေက ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းလွန်းလို့ စင်အောက်မှာ ကနေတဲ့သူတွေ မနေနိုင် မထိုင်နိုင်ဖြစ်ပြီး အလုအယက် စင်နားကပ်ကြတော့ စီစဉ်သူ ဂျွန်လွင်ကိုယ်တိုင် ထွက်ပြီး ပွဲထိန်းခဲ့ရ
ထိုင်းသင်္ကြန်လည်း လန်းပါတယ် (ဓာတ်ပုံများ)
ရွှေဂုံတိုင်ဂုံ တံတား အနီးတွင် သင်္ကြန်လည်သည့် ယာဉ်မှ လမ်းလယ် ကွန်ကရစ်တုံးအား ၀င်ရောက် တိုက်မိ
၁၄.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၈၄၅ အချိန် ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်း အတိုင်း တောင်မှ မြောက်သို့ သင်္ကြန် လည်ပတ်ရန် အတွက် ယာဉ်မောင်း ချမ်းမြေ့ဦး ၊ (၂၈)နှစ်၊ (ဘ)ဦးလှမြင့် သုံးခွမြို့နယ်နေသူ မောင်းနှင်လာသော ၈ခ/---- ရှမ်းစတား ဂျစ်အပြာရောင် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်သည် ရွှေဂုံတိုင် ဂုံးတံတား အနီးအရောက် လမ်းလယ် ကွန်ကရစ်တုံးအား ၀င်ရောက် တိုက်မိခဲ့ပါသည်။
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် လမ်းလယ် ကွန်ကရစ်တုံးနှင့် ယာဉ်တို့ ပျက်စီးသွားခဲ့ သဖြင့် ယာဉ် မဆင်မခြင် မောင်းနှင်သူ ချမ်းမြေ့ဦးကို ဗဟန်း မြို့မရဲစခန်း (ပ)၃၇/ ၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၂၇၉ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုက မြန်မာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကျင်းပ (ရုပ်/သံ)
ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုက မြန်မာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကျင်းပခဲ့တာကိုတော့ ဦးဇော်ဇော်လှိုင်က သတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
သင်္ကြန်ကာလတွင်း မလုံမခြုံဝတ်စားဖျော်ဖြေမှု မလုပ်ဖို့ ထပ်မံသတိပေး (ရုပ်/သံ)
ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကြိုနေ့မှာ အရက်ဘီယာ ရောင်းချသူတွေကို သက်ဆုိုင်ရာက ဖမ်းဆီး
ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကြိုနေ့မှာ အရက်ဘီယာ ရောင်းချသူတွေကို သက်ဆုိုင်ရာက ဖမ်းဆီး အရေးယူခဲ့ပါတယ်။ ဦးအောင်ကြီးက သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ကြွက်လောက်ရှိတဲ့ ခရုကြီးတွေက တိုက်ခိုက်
ကြားရတာတော့ သဘာဝလွန် ရုပ်ရှင်ကား တစ်ကားလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အမေရိကန်၊ ဖလော်ရီဒါ တောင်ပိုင်းက လူတွေအတွက်တော့ တစ်ကယ့် ဖြစ်ရပ်မှန်ပါ။ သူတို့တွေက ဒီခရုတွေဆီကလာတဲ့
သူငယ်ချင်းရဲ့ ကော်ဖီထဲ ကျင်ငယ်ရောထဲ့လို့ ငါးထောင့်တစ်ဒေါ်လာ ($5001) ပေးဆောင်ရ
တရားခံ James Carroll Butler
Culpeper စီရင်စုမှာ ရှိတဲ့ ဂျူရီလူကြီးအဖွဲ့က James Carroll Butler ကို သူ့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်း Michael Utz အား ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ဖို့ အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက သူတို့နှစ်ယောက် မြို့တော်ဝန်ထမ်း လုပ်ခဲ့စဉ်အချိန်က အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၅၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ James က မြို့တော်၏ စွန့်ပစ်ရေသန့်စက်ရုံမှာ နေ့စဉ် တိုးတက်မှုအခြေအနေကို သတင်းပို့သူအဖြစ်နဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် Utz ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ဆောင်မှုဌာနမှာ စက်ပြင်ဆရာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။
၂၀၀၉ခုနှစ် မတ်လ လဆန်းပိုင်း ရက်တစ်ရက်မှာ James က သန့်စင်ခန်းမှ ကျင်ငယ်အချို့ကို ယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့ Utz သောက်မယ့် ကော်ဖီအိုးအလွတ်ထဲ လောင်းထည့်ခဲ့ပြီး သူ၏သူငယ်ချင်း သောက်မည့် အချိန်ထိစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။
ကံကောင်းစွာပဲ သူ့သူငယ်ချင်းက တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ကော်ဖီမဖျော်ခင်မှာ ကျင်ငယ်နံ့ ရနေတာကြောင့် သူ့ရဲ့ ကြီးကြပ်သူကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းနောက် ကော်ဖီအိုးကို ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ၎င်းအိုးထဲမှာ ကျင်ငယ်နဲ့ မစင်ကဲ့သို့အရာများကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
James က တရားရုံးကို ပေးပို့ခဲ့တဲ့ စာထဲမှာ
အလုပ်ကရရှိခဲ့တဲ့ ဖိအားတွေကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အပေါ်မှာ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အမှားအတွက် ကျွန်တော်အလွန်ပဲ ရှက်မိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကလေးဆန်တဲ့ ခပ်ပိန်းပိန်း လုပ်ရပ်အပေါ် အလွန်ပဲ ရှက်မိပါတယ်။
James ရဲ့ သေးငယ်သော အမှားအယွင်းတစ်ခုကြောင့် သူဟာ ထောင်ဒဏ်တစ်လ ကျခံရပြီးတော့ တစ်နှစ်တိတိ စောင့်ကြည့်ခံခဲ့ရပါတယ်။
သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းက နစ်နာကြေး ဒေါ်လာ ၇၂၈၀၀၀ ရလိုမှုနဲ့ သူ့ကိုတရားစွဲခဲ့ပါတယ်။ တရားရုံးလူကြီးအဖွဲ့ကတော့ နစ်နာကြေးအဖြစ် တစ်ဒေါ်လာသာ ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဒဏ်ငွေအဖြစ်နဲ့ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀(ငါးထောင်) ပေးဆောင်ရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် တရားသူကြီး ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ၎င်းက ကျေနပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့နှင့် ဒို့မြန်မာလူမှုကွန်ယက် မိသားစုတို့ ကဦးစီးကျင်းပတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံး မသန်စွမ်း သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်
ရန်ကုန်မြို့က ရခိုင်သင်္ကြန် သတင်းမြင်ကွင်း (ရုပ်/သံ)
တင်ဆက် - ယမင်းဦး
သင်္ကြန်မှာ ပျော်နေတဲ့ သက်မွန်မြင့် နဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်
ဂျပန်မှာ ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွား
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးရောဂါတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက အတည်ပြု ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းက ကြက်ခြံတစ်ခုမှာ ကြက်ငှက်တုတ်ကွေး ရောဂါဖြစ်ပွားနေတာကို အာဏာပိုင်တွေက စမ်းသပ်သိရှိရပြီးနောက်ပိုင်း ကြက်အကောင်ပေါင်း တစ်သိန်း တစ်သောင်းကျော်ကို သတ်ပစ်ဖို့ အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေက Kumamoto ဒေသမှာရှိတဲ့ ကြက် အကောင်ပေါင်း ငါးသောင်းကျော်ရှိတဲ့ ကြက်ခြံတစ်ခြံက ကြက်တွေကို DNA စမ်းသပ်ပြုလုပ်ရာကနေ H5 အမျိုးအစား ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးရောဂါကို တွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ရောဂါ တွေ့ရှိပြီးနောက်ပိုင်း အဲဒီကြက်ခြံက ကြက်အကောင်ပေါင်း ငါးသောင်းကျော်နဲ့ တခြားကြက်ခြံတစ်ခြံက ကြက်အကောင်ပေါင်း ငါးသောင်းကျော်တို့ကို သတ်ပစ်ဖို့ အာဏာပိုင်တွေက အမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အခုတကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့ ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးရောဂါဟာ ဂျပန်နိုင်ငံအတွက် သုံးနှစ်အတွင်း ပထမအကြိမ် ထပ်မံဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ABC Radio Australia - မြန်မာပိုင်း
အရှိန်လွန်ကာ ယာဉ်တိမ်းမှောက်သဖြင့် ယာဉ်ပေါ်ပါသူ (၆)ဦးဒဏ်ရာရ
၁၄.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၈၃၀ အချိန် အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း အတိုင်း အင်းစိန်ဘက်မှ မရမ်းကုန်းဘက်သို့ ယာဉ်မောင်းတင်အုန်း (၅၁)နှစ်၊ (ဘ)ဦးကျော်အုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်နေသူ မောင်းနှင်လာသော 8D---- လိုက်ထရပ် အပြာရောင်ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်သည် ကြို့ကုန်းမှတ်တိုင်အလွန် အရောက် အရှိန်လွန်၍ ယာဘက်သို့တိမ်းမှောက်သွားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ယာဉ်ပျက်စီးပြီး ယာဉ်ပေါ်ပါသူ ကျား(၆)ဦးတို့တွင် ဖူးရောင်နာကျင်ဒဏ်ရာများရရှိကာ အင်းစိန်ဆေးရုံတွင် အတွင်း/ပြင်ပလူနာများအဖြစ် တက်ရောက်ကုသရသောကြောင့် ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်းနှင်သူ တင်အုန်းအား အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်း
ယာဉ်(ပ)၄၆/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၂၇၉/၃၃၈ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူ
သိင်္ဂီထွန်း| တနင်္လာနေ့၊ ဧပြီလ ၁၄ရက်၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်။
ရန်ကုန်၊ မဇ္ဈိမ။ ။ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် ရွှေမြန်မာ (Golden Myanmar) လေယာဉ်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာလေကြောင်းလိုင်း (MAI)ကို ဧပြီလ ၁၄ရက် နံနက် ၆နာရီခန့်က တိုက်မိခဲ့သဖြင့်
ငါးနှစ်ကျော် ကာလအတွင်း မြန်မာ အလုပ်သမား ၇ဝဝဝ ကျော် ထိုင်းက ပြန်ပို့
တာချီလိတ် ဧပြီ ၁၃
တာချီလိတ်ရှိ မြန်မာ- ထိုင်း အမှတ်(၁) ချစ်ကြည်ရေး တံတား၌ ဧပြီ ၁၁ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခွဲက ခရိုင်/ မြို့နယ် လူကုန်ကူးမှု တားဆီး ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သည့် မကဖ(၈)မှ ဦးသိန်းမောင်ဦးစီး၊ ဒုတိယမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဝင်းအောင်၊ လူကုန်ကူးမှု တားဆီး နှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲအုပ် မင်းဇော်နှင့်ဌာနဆိုင်ရာများ ပါဝင်သောအဖွဲ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံ လ၀က ဦးစီးအရာရှိ Sae siton ၊ မယ်ဆိုင် ခရိုင်လ၀ကမှူး Kanlayar Phommalin ၊ မယ်ဆိုင်ခရိုင် ဒုလ၀ကမှူး Sadary yansukyan တို့မှ တရားမဝင် မြန်မာအလုပ်သမား အမျိုးသား ၂၁ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၁၄ ဦးတို့ကို လာရောက် လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လွှဲပြောင်းပေးသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၃၅ ဦးတို့အား မကာဟိုခမ်းရပ်ကွက်ရှိ မဟာမြတ်မုနိကျောင်းဝင်းအတွင်း၌ အခြေပြုပြီး ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြင့် စစ်ဆေးခဲ့ရာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း တရားမဝင် ဝင်ရောက်ခြင်း၊ နေထိုင်ခွင့် ကတ်ပြားများမရှိခြင်းနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွင့် ခုနစ်ရက် ကျော်လွန်ခြင်းတို့ကြောင့် ရှောင်တခင် စစ်ဆေးချက် အရ ဖမ်းဆီးခံရခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့မှာ လူကုန်ကူး ခံရခြင်း မရှိကြောင်း၊ လွှဲပြောင်း အလုပ်သမား ၃၅ ဦးအား မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အစီအစဉ်အရ ၎င်းတို့၏ မိဘ ဆွေမျိုးများထံ ခံဝန်ဖြင့် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲက အပ်နှံပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ လွှဲပြောင်း ပေးအပ်သည့် မြန်မာ အလုပ်သမားများမှာ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်မှ ၂၀၁၄ခုနှစ် ဧပြီ ၁၁ ရက်ထိ အမျိုးသား ၅၁၈၃ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၈၁၈ ဦး စုစုပေါင်း ၇၀၀၁ ဦး ရှိကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသမီးအား စနောက်ခဲ့ရာမှ စတင်ကာ လူသတ်မှုဖြစ်
၁၃.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၅၃၀အချိန် တာမွေမြို့နယ်နေ ကိုဘာဘူ(ခ) ကိုသန်းအောင်သည် ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ ပီလခတ်ကျေးရွာနေ ကိုတင်ဝင်း၊ (၂၅)နှစ်၊ (ဘ)ဦးကွန်တရာဆာမိအပါအ၀င် သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ပီလခတ်ကျေးရွာ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းမီးနင်းပွဲသို့ လမ်းလျှောက်သွားခဲ့ကြောင်း၊
ထိုသို့သွားခဲ့စဉ် ကိုတင်ဝင်းမှ မီးနင်းပွဲသို့လာသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား စနောက်ခဲ့ရာ ၎င်းအမျိုးသမီးနှင့်အတူပါသူအမျိုးသားတစ်ဦးက ကိုတင်ဝင်း၏
ရင်ဘတ်အား လက်သီးဖြင့်ထိုး၊ ခြေထောက်ဖြင့်ကန်ခဲ့သဖြင့် သတိမေ့လဲကျ
သွားခဲ့၍ ကျောက်တန်းဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ရကြောင်း၊ ဆေးရုံအရောက်တွင် ကိုတင်ဝင်းမှာ အခင်းဖြစ်စဉ်ကရရှိခဲ့သည့် ရင်ဘတ်နီရဲဒဏ်ရာဖြင့်သေဆုံး သွားခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းသို့ ကျူးလွန်သူကိုစုံစမ်းရာ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရုံးသပြေကန်ကျေးရွာနေ မာသီး(ခ) ဇော်ဝင်း (၂၁)နှစ်၊ (ဘ)ဦးတန်ကောလူး
တိုင်တန်းချက်အရ ကျောက်တန်းမြို့မရဲစခန်း (ပ) ၆၉/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့်အမှုဖွင့်ကာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ မာသီး(ခ)ဇော်ဝင်းကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
သွေးတိုးအတွက် သဘာဝ ဆေးနည်း
ဆေးနည်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၄င်းဆေးအမည် ၅-မျိုးကို ဆတူယူ၍ ညက်အောင် အမှုန့်ကြိတ်ပြီး ပျားရည်နဲ့ တေပါ။ ပြီးလျှင် ရွေးစေ့ခန့်အရွယ် အလုံးကလေးများ လုံးထားပါ။
သွေ့သွားအောင် ဆေးလုံးများကို နေရောင်ပြပြီး ပုလင်းထဲထည့်ပြီး လေလုံအောင် ပိတ်ထားပါ။ နံနက်-တစ်လုံး၊ ညပိုင်း-တစ်လုံး နေ့စဉ်သောက်သွားပါက သွေးတိုးရောဂါ သက်သာပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်တစ်ခြမ်း သေခြင်းနှင့် အထိုင်အထ ခက်ခဲတဲ့ ဝေဒနာရှင်များလည်း စွဲစွဲမြဲမြဲ စားသုံးပေးပါက သက်သာပျောက်ကင်းပါတယ်။ ရောဂါပျောက်တဲ့အခါ နေ့စဉ် စားသုံးဖို့ မလိုအပ်တော့ဘဲ တစ်ခါတစ်ရံမှသာ စားပေးဖို့ လိုပါတယ်။
သွေးတိုးရောဂါကြောင့် သွေးတက်ပြီး အခံရခက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဒန့်သလွန်ပင်မှ တမာစေးလိုထွက်နေတဲ့ အစေးကို မန်းကျည်းစေ့ (၂-ပဲသားခန့်) စားပေးပါကလည်း သွေးပေါင်ကျပြီး သက်သာပျောက်ကင်းသွား ပါတယ်။
ဒန့်သလွန်အစေးကို အပင်မှ ချက်ချင်း ခွါယူတဲ့အစေးကသာ ပိုပြီး အာနိသင် ကောင်းပါတယ်။ အစေးကို ခွါယူပြီး ဆောင်ထားရင်လဲ ရပါတယ်။
မိမိအိမ်မှ ဒန့်သလွန်ပင်ကိုဖြစ်စေ၊ မိမိအိမ်မှာ မရှိခဲ့ရင် အိမ်နီးဝန်းကျင်မှ ဒန့်သလွန်ပင်များကို ဖြစ်စေ၊ ပိုင်ရှင်ကို ပြောပြခွင့်တောင်းပြီး အစေးများ ထွက်လာအောင် ပင်စည်ကို ဓားနဲ့ အနည်းငယ် ထစ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါမှသာ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ဒန့်သလွန်အစေးကို အလွယ်တကူ ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒန့်သလွန်အရွက်နဲ့ အသီးများကို စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် သွေးတိုးကျစေတဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိကြောင်းကိုတော့ အားလုံးသိရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒန့်သလွန်အစေးရဲ့ အကျိုးအာနိသင်ထူးကိုတော့ လူသိနည်းကြပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် အလွယ်တကူရရှိနိုင်တဲ့ ဒန့်သလွန်အစေးက အသီးနဲ့အရွက်များထက် ပိုပြီး အစွမ်းထက်ကြောင်း ကောင်းမွန်ကြောင်းကို ဘဝတူသွေးတိုးဝေဒနာရှင်များအတွက် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
credit to >>စိမ့်စမ်းရေ
သင်္ကြန်ရက်တွေအတွင်း လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ချထား
သင်္ကြန်မှာ ရမ်းကားသူတွေကို ရဲက ချက်ချင်း အရေးယူမယ်လို့ ဆို
နှစ်စဉ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ သင်္ကြန် ပွဲတော်ကို ဒီနှစ်မှာတော့ အာဏာပိုင်တွေက လုံခြုံရေး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချထား ဆောင်ရွက် ပေးနေပါတယ်။
ခါတိုင်းနှစ်တွေကထက် ရေကစား မဏ္ဍပ်တွေ၊ ရေပက်ခံ ထွက်သူတွေ ပိုများနေတဲ့အတွက် သူတို့တွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို အရင်ကထက် တိုးမြှင့် ချထားပေးတယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ ရုံး က ရဲမှူးမြင့်ထွေးက ဘီဘီစီကို ပြောပြပါတယ်။
သင်္ကြန်ရက်တွေအတွင်း တုတ်၊ဓား လက်နက်တွေ ကိုင်ဆောင်ခွင့်မရှိ၊ အရက်သေစာနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ရောင်းချခွင့် မရှိ ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းတွေကို အာဏာပိုင်တွေက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မဏ္ဍပ်တွေနဲ့ လူစည်ကားတဲ့ နေရာအနီးတဝိုက်မှာလည်း CCTV ကင်မရာတွေ တပ်၊ လုံခြုံရေး ကွပ်ကဲမှုရုံးတွေ ထားရှိပြီး ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားသူတွေ၊ မူးယစ် ရမ်းကားသူတွေကို ချက်ချင်း အရေးယူမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ရဲမှူးမြင့်ထွေးက ဆိုပါတယ်။
(၂၀၁၀)သင်္ကြန်တုန်းက ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်း X20 မဏ္ဍပ်မှာ လူသေဆုံးမှုတွေ ရှိခဲ့တဲ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု လို ဖြစ်ရပ်မျိုး ထပ်မဖြစ်အောင် သင်္ကြန် မစခင်ကတည်းက မိုင်းရှင်းလင်းရေး အဖွဲ့နဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်နေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သင်္ကြန် ရောက်တိုင်း လူငယ်တွေက အရက်သေစာနဲ့ စိတ်ကြွဆေးလို မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို မဆင်မခြင် သုံးစွဲကြတာမို့ ဒီကနေ ကား မတော်တဆ တိုက်မှုတွေဖြစ်ပြီး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရမှုတွေနဲ့ လူသေဆုံးမှုတွေ ရှိလာနိုင်တဲ့အတွက် အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ သုံးစွဲတဲ့လူငယ်တွေထက် အရက်နဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းသူတွေကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသင့်တယ်လို့ တချို့က သုံးသပ်ပါတယ်။
အရှိန်ထိန်းရော်ဘာဘလောက်တုံးများ အသုံးပြုကာ ပူးပေါင်းအဖွဲ့များနှင့် ညပိုင်းတွင် စစ်ဆေးသွားမည်
ရန်ကုန် ဧပြီ ၁၃
ရန်ကုန်မြို့တွင်း အရှိန်ပြင်း မောင်းနှင်နေကြသော ယာဉ်များအား စည်းကမ်းတကျ ဖြတ်သန်းသွားလာ
မောင်းနှင်နိုင်ကြစေရန်အတွက် Mobile အရှိန်ထိန်း Slow Down ရှစ်ပေအရှည် ရော်ဘာဘလောက်တုံး များအသုံးပြုကာ ညပိုင်းတွင် ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များဖြင့် စစ်ဆေး အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ အမှတ်(၂) ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံး(ရန်ကုန်) မှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
အဆိုပါ Mobile အရှိန်ထိန်း Slow Down ၈ ပေအရှည် ရော်ဘာဘလောက်တုံးများကို ယာဉ် စည်းကမ်းထိန်း သိမ်းရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ ညပိုင်းပူးပေါင်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များအတွက် အစုံ ၂၀ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပြီး နေရာ ၁၀ နေရာအတွက် တစ်နေရာကို နှစ်ခုနှုန်းဖြင့် ထားရှိကာ အနီးကပ်စစ်ဆေးမည့်နေရာများနှင့် အလယ်ယာဉ်ကြော နေရာများတွင် အနေအထားကိုကြည့်ပြီး သတ်မှတ် နေရာများချထားကာ စစ်ဆေးအရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ အမှတ် (၂)ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံး (ရန်ကုန်) မှ ဒုရဲမှူးကြီး လင်းထွဋ်က “ညပိုင်း မှာ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့်သွားလာနေကြတဲ့ ယာဉ်တွေရှိနေပါတယ်။ ဒီယာဉ်တွေကို နေရာ ၁၀ နေရာမှာ တားဆီးစစ်ဆေးမယ်၊ စနစ်တကျ Team အဖွဲ့များဖွဲ့ပြီး ဖမ်းဆီးဖို့ရှိပါတယ်။ ယာဉ် စည်းကမ်းအရ ကျွန်တော်တို့က သင်္ကြန်ကာလမှာလည်း နားလို့မရပါဘူး။
ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး အရ ယာဉ်မောင်းနှင်သမျှကာလပတ်လုံးနှင့် ယာဉ်တွေရှိနေသမျှ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ရှိနေကြမှာပါ။
သင်္ကြန်ကာလအတွင်းမှာလည်း ဖမ်းဆီးမှု လျော့ပေါ့ပေးမယ်ဆိုပေမယ့် အများပြည်သူတွေအတွက် အနှောင့် အယှက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီယာဉ်ကို အရေးယူသွားမှာပါ။ ကိုယ့် လွတ်လပ်ခွင့်က သူတစ်ပါးကိုထိခိုက် လို့ကတော့ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တွေကို အများပြည်သူတွေအတွက် အသိပေးတင်ပြလိုက်တာပါ” ဟု ဆိုသည်။ လက်ရှိ ညအချိန် စည်းကမ်းမဲ့ မောင်းနှင်နေကြသော ပြိုင်ကားများ အပါအဝင် အခြားယာဉ်များအားနေရာ ၁၀ နေရာတွင် အဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့ဖြင့် တားဆီးပိတ်ဆို့ စစ်ဆေးအရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေရာ ဧပြီ ၁ရက်မှ ၉ ရက်အထိ စည်းကမ်းမဲ့ ပြိုင်ကား ၁၆ စီး အပါအဝင် စုစုပေါင်း ယာဉ်အစီးရေ ၁၅၀၇၁ စီး စစ်ဆေးအရေးယူထားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး ညပိုင်း လှည့်ကင်းအဖွဲ့များဖြင့် စစ်ဆေးအရေးယူထားသော ယာဉ်များတွင် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ မှသတ်မှတ်မှတ်တိုင်မဟုတ်ဘဲ လူ အတင်အချပြုလုပ်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်များ သတ်မှတ်လိုင်စင်မရှိဘဲ ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်း၊ မဝင်ရသော လမ်းဝင်ခြင်း၊ ဘေးတံခါးများဖွင့်မောင်းနှင်ခြင်း၊ ဖြူနီကျားရပ်ခြင်း၊ မီးမစုံခြင်း၊ ယာဉ်နှစ်ထပ်ရပ်ခြင်း၊မျဉ်းသေကို ဖြတ်မောင်းနှင်ခြင်းစသည်ဖြင့် စည်းကမ်းပျက်ယာဉ် အမှုပေါင်း ၁၇၇၃ မှု အရေးယူ ဆောင်ရွက် ထားရှိကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ အမှတ် (၂)ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူး ရုံး (ရန်ကုန်)မှ ထုတ်ပြန်စာရင်းများအရ သိရသည်။
ဒီတောမီးဟာ ဗာလ်ပါရိုင်ဇိုမြို့ သမိုင်းမှာ အဆိုးဝါးဆုံးလို့ ချီလီ သမ္မတ ပြော
ချီလီနိုင်ငံက သမိုင်းဝင် ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့ ဗာလ်ပါရိုင်ဇိုမြို့မှာ တောမီး အကြီးအကျယ် ပျံ့နှံ့ လောင်ကျွမ်းခဲ့ရာမှာ အနည်းဆုံး လူ၁၁ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး လူတသောင်းကျော်လောက်ကို ဘေးကင်းရာ ကယ်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။
အိမ်ပေါင်း ရာနဲ့ချီ မီးလောင်ကျွမ်း ပျက်စီးသွားစေခဲ့တဲ့ အဲဒီ တောမီးကို စနေနေ့ကတည်းက မီးသတ်သမား တထောင်ကျော်လောက်က ကြိုးစား ငြှိမ်းသတ်နေ ကြပါတယ်။
ကယ်ဆယ်ရေး ဆောင်ရွက်မှုတွေကို ကြီးကြပ်ဖို့ ဗာလ်ပါရိုင်ဇိုမြို့မှာ ရောက်နေတဲ့ ချီလီ သမ္မတ မီချဲလ် ဘချလက်တ် က ဒီတောမီးဟာ ဗာလ်ပါရိုင်ဇိုမြို့ သမိုင်းမှာ အဆိုးဝါးဆုံး တောမီး ဖြစ်ဘွယ် ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဗာလ်ပါရိုင်ဇိုမြို့ကို ကပ်ဘေးသင့် ဇုံနယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ် ကြေညာခဲ့အပြီး ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ စစ်တပ်က ဦးဆောင်လုပ်ဖို့ သမ္မတ ဘချလက်တ်က ညွှန်ကြားထားပါတယ်။
တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ရှိအောင်နဲ့ ခိုးဆိုး လုယက်မှုတွေ မဖြစ်အောင် တားဆီးတဲ့အနေနဲ့ လမ်းမတွေပေါ်မှာ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်း ချထားလိုက်ပါတယ်။
နေအိမ်တွေကနေ ကိုယ်လွတ်ရုန်း ထွက်ပြေးခဲ့ရသူတွေအတွက် ယာယီတဲတွေ ဆောက်ထားပေးတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဗာလ်ပါရိုင်ဇိုမြို့ဟာ တောင်တန်း အမြင့်တွေပေါ်မှာ ဆောက်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး ကွေ့ကောက်တဲ့ လမ်းကျဉ်း လမ်းသွယ်တွေကြောင့် မီးသတ်သမားတွေ အတွက် ပိုအခက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
MH370 ရှာဖွေမှု ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲ
မလေးရှားလေယာဉ်ရှာဖွေမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသံလှိုင်း အသစ်တွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ ရက်အတွင်း ထပ်မံရရှိခြင်း မရှိတော့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းရှာဖွေရေးအဖွဲ့တွေဟာ လေယာဉ်ရှာဖွေဖို့ လေယာဉ် ၁၂ စင်း၊ သင်္ဘော ၁၄ စင်းနဲ့ ရှာဖွေရေးဧရိယာ ကျဉ်းနိုင်သမျှ ကျဉ်းအောင် ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အကုန်မှာ ဘာအချက်ပြအသံလှိုင်းမှ မရရှိတော့ဘူးလို့ ပူးပေါင်းရှာဖွေရေးအေဂျင်စီက ပြောပါတယ်။ အချက်ပြ အသံလှိုင်းကို နောက်ဆုံး ဖမ်းမိခဲ့တာကတော့ အင်္ဂါနေ့တုန်းက ဖြစ်ပြီး ၄ ကြိမ်တိတိ ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သောကြာနေ့တုန်းက RAAF Orion လေယာဉ်က အသံလှိုင်းတခုကို ဖမ်းမိခဲ့ပေမယ့် လေယာဉ်ရဲ့ မှတ်တမ်းတင်စက်က ထုတ်လွှင့်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီက အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အခုလို ရှာဖွေရေး လုပ်နေစဉ်မှာပဲ အကယ်၍သာ လေယာဉ်ရဲ့ မှတ်တမ်းတင် စက်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူတွေက ထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မလေးရှားယာယီ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီး Hishammuddin Hussein က ရှင်းလင်းချက်တခု လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မလေးရှားလေယာဉ်ဟာ လူပေါင်း ၂၃၉ ဦးတင်ဆောင်ပြီး မတ်လ ၈ ရက်နေ့ ကနေ ဒီကနေ့အထိ ပျောက်ဆုံးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်အရေးတွေ တင်ပြဆွေးနွေးဖို့ KIA ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် ဒုတိယ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်နဲ့ အဖွဲ့ဟာ ဒေသအချိန် ဧပြီလ ၁၃ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီခရီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်က အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျနော်က အခုဒီမှာ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအရေး ကချင်အရေး စိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူများ မိတ်ဆွေများနဲ့ ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ ဒီမှာရှိတဲ့အစိုးရပိုင်းက တာဝန်ရှိတဲ့သူများကို ကျနော်တို့အခြေအနေလေး တင်ပြနိုင်ဖို့အတွက် လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊ ကျနော်တို့ လေးယောက်လာပါတယ်”
ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်ကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဖိတ်ကြားခဲ့တာလို့သိရပြီး၊ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက အရာရှိတွေ၊ အမေရိကန်လွှတ်တော် အမတ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဗုိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်နဲ့အဖွဲ့ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ၁၂ ရက်ကြာ နေထိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။
အလှအပအတွက် အရေးပေါ် ပြုပြင်နည်း
ပါးနီလိမ်းတာ များသွားတာကြောင့် ပါးနီအရောင် လျော့အောင် တစ်သျှးနဲ့ ပွတ်ထုတ်လိုက်မယ့် အစား ပေါင်ဒါမှုန့် ထပ်လိမ်းပေးလိုက်ပါ။ သန့်ရှင်းတဲ့ ဘရပ်ရ်ှနဲ့ ပေါင်ဒါမုန့်ကို တို့ယူပြီး ပါးနီဆိုးထားတဲ့ ပါးပြင်ပေါ်မှာ ထပ်လိမ်းလိုက်ရင် ပါးနီအရောင် လျော့သွားပါလိမ့်မယ်
Tips! ပေါင်ဒါမှုန့်ကို ဘရပ်ရ်ှနဲ့ တို့ပြီးနောက်မှာ ဘရပ်ရ်ှကို နည်းနည်းခါလိုက်ပါ။ ပေါင်ဒါ သိပ်များလွန်းရင် သင့်ပါးပြင် အရောင် ရင့်လွန်းတာ ဒါမှမဟုတ် ဖျော့လွန်းတာတွေ ဖြစ်နိုင်လို့ပါ။
၀ါဂွမ်းအနည်းငယ်ကို အရက်ပြန်ဆွတ်ပြီး ရေမွှေးဖျန်းထားတဲ့ အရေပြားပေါ်ကို သုတ်လိမ်းလိုက်ပါ။ အရက်ပြန်က ရေမွှေးမှာ ပါဝင်တဲ့ အဆီတွေနဲ့ ရောစပ်သွားပြီး အနံ့တွေ အငွေ့ပြန်စေတာကြောင့် ရေမွှေး အနံ့ပြင်းတာ လျော့သွားစေနိုင်ပါတယ်။
Tips! ရေမွှေးဆွတ်ရင် သင့်အရေပြားနဲ့ ၁၀လက်မခန့် ခွာပြီးမှ ဆွတ်ပါ။ ဒီလို လုပ်တာကြောင့် ရေမွှေးနံ့ဟာ တစ်နေရာတည်းမှာ စုနေမယ့် အစားပျံ့နှံ့သွားနိုင်ပါတယ်။
တစ်နေကုန် ရေမွှေးနံ့သင်းပျံ့နေအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိသူများ ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တနေကုန် ရေမွှေးနံ့ သင်းပျံ့နေစေဖို့
ရေမွှေးကြိုက်သူ ရေမွှေးဆွတ်သူတိုင်း သိသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေပါ။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ရေမွှေးကြိုက်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အခြားသူတွေလည်း သိသင့်တယ်ထင်လို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
သင်ဟာ အဆီပြန်တဲ့ အသာူးအရေ ပိုင်ရှင် ဆိုရင်တော့ ကံကောင်းသူပေါ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စိုစွတ်တဲ့ အရေပြားမှာ ရေမွှေးနံ့ပိုစွဲလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ခြောက်သွေ့တဲ့ အသားအရေ ပိုင်ရှင် ဖြစ်ခဲ့ရင် သင်စွတ်လိုတဲ့ အရေပြားနေရာကို အရင်ဆုံး အစိုဓါတ်ရစေဖို့ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ အဲလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ ရေချိုးပြီးမှ စိုစွတ်နေတဲ့ အသားအရေပေါ်မှာခ ရေမွှေးဆွတ်ဖြန်းဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
သွေးခုန်နှုန်းကို တိုင်းတာနိုင်တဲ့နေရာကို ဆွတ်ဖြန်းပါ
အပူဟာ ရေမွှေးရနံ့ကို အသက်ဝင်စေတာကြောင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က သွေးခုန်နှုန်း တိုင်းတာနိုင်တဲ့ နေရာတွေဟာ ရေမွှေးဆွတ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ သွေးရဲ့အပူကြောင့် ရေမွှေးရနံ့ကို ပိုပြီး အသက်ဝင်စေတာကြောင့် သွေးခုန်နှုန်း တိုင်းတာနိုင်တဲ့ နားရွက်အနောက်ဖက်၊ လက်ဖျံ၊ ဇက်ကြော၊ တံတောင်ဆစ် အတွင်းပိုင်းနဲ့ ဒူးခေါက်ကွေး နေရာတို့ကို ရွေးချယ်ပြီး ဆွတ်ဖျန်းနိုင်ပါတယ်။
ရေမွှေးဆွတ်ပြီးတဲ့အခါ အများစုက ရေမွှေးဆွတ်ထားတဲ့ နေရာကို ပွတ်ဖို့လိုတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ အဲဒါဟာ အမှားကြီးတစ်ခုပါ။ အဲလိုပွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် မော်လီကျူးတွေကို ဖျက်ဆီးလိုက်သလို ဖြစ်ပြီး အနံ့တွေ လေထဲမှာ ပျောက်သွားသလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အပူ၊ အလင်းရောင်နဲ့ စိုထိုင်းမှု တွေဟာ ရေမွှေးရနံ့ကို ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရေမွှေးပုလင်းတွေကို အေးပြီး နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ရနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးတွေမှာ မထားသင့်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ရေချိုးခန်းထဲမှာ လည်း မထားသင့်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ ရေပူတွေကနေ တဆင့်ရလာတဲ့ အပူနဲ့စိုထိုင်းမှုတို့ကြောင့် ရေမွှေးရနံ့ ပျက်ပြယ်စေတတ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆလွန်းယာဉ်မှ ရေကစားမဏ္ဍပ်အားဝင်ရောက်တိုက်မိသဖြင့် ရေကစားနေသူ (၈)ဦးဒဏ်ရာရ
၁၃.၄.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၁၆၃၀အချိန် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်းအတိုင်း အနောက်မှအရှေ့သို့ ယာဉ်မောင်း သန်းဝင်းအောင် (၃၉)နှစ်၊ (ဘ)ဦးကျော်မြ၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နေသူမောင်းနှင်လာသော ၆ဃ/----၊ ALTEZZA ဆလွန်းငွေမင်ရောင်ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်သည် ရွှေပြည်သာကွေ့
မှတ်တိုင်အနီးအရောက် လမ်း၏ယာဘက်ဘေးရှိ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်
ရေးတိုင်နှင့် ရေကစားမဏ္ဍပ်တို့အား ၀င်ရောက်တိုက်မိခဲ့ပါသည်။
ပျက်စီးခဲ့ပြီး ရေကစားမဏ္ဍပ်၌ ရေကစားနေသူ(၈)ဦးတို့တွင် ဖူးရောင်
သန်းဝင်းအောင် အား ရွှေပြည်သာမြို့မရဲစခန်းယာဉ်(ပ)၁၅/၂၀၁၄၊
ပြစ်မှုပုဒ်မ၂၇၉/၃၃၇/၃၃၈ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ နေရာရွှေ့ပြောင်းသည့်လေယာဉ်မှ ရပ်ထားသောလေယာဉ်ကို တိုက်မိ
၁၄.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၆၄၀ အချိန် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်
ဆိုင်ရာလေဆိပ်၊ လေယာဉ်ကွင်းအတွင်း Golden Myanmar Air Way (GMA) လေကြောင်းမှ လေယာဉ်အမှတ် XY-AGT ၊ လေယာဉ်အမျိုးအစား A-320 သည် Push Backယာဉ်ဖြင့်တွန်း၍နေရာရွှေ့ပြောင်းရန်
နှစ်သစ်မင်္ဂလာ သင်္ကြန်အခါကို မန္တလေးသူ မန္တလေးသားတွေက ဒီလိုပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေနဲ့ ကြိုဆိုကြပါတယ်။
Doctors implant lab-grown vagina ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာ လုပ်တဲ့ဗဂျိုင်းနား
• အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဗဂျိုင်းနားကို ဆရာဝန်တွေနေ ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာ လုပ်ပေးနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းဟာ ကနေ့ ဟော့်-နယူးစ် ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်မလေး လေးယောက်မှာ ဗဂျိုင်းနာအသစ်
ဧပြီ၁၃ရက် သင်္ကြန်အကြို အနုပညာရှင်များ၏ ရင်ခုန်သံများ
ဧပြီ ၁၃ရက်တွင် ကျရောက်သည့် သင်္ကြန်အကြိုနေ့ ၌ ရန်ကုန် မြို့တွင်း ရှိမဏ္ဍာပ် များတွင် လာရောက်ရေကစားကြသည့် အနုပညာရှင် များ၏ သင်္ကြန်ရင်ခုန်သံများနှင့်သင်္ကြန်တွင်း ဗုံးခွဲမည်ဆိုသည့် သတင်းထွက်ပေါ်နေခြင်းကြောင့် ၄င်းတို့၏ ရင်တွင်း ခံစားမှု၊ပျော်ရွှင်မှုများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
နေဒွေး(Four Elements မဏ္ဍာပ်)
အနုပညာ မောင်နှမတွေနဲ့ အတူ ပါဝင်ရေကစားရတာ ပျော်တယ်။ မနှစ်က နေပြည်တော်ACE မဏ္ဍာပ်မှာ ရှိခဲ့တယ်။ ဒီနှစ်သင်္ကြန် မှာ အကြမ်းဖက်သမားတွေ အနေနဲ့ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် လူကြီးတွေကလည်းအချိန်မီတားဆီးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အားတီ (sky net မဏ္ဍာပ်)
ဒီနှစ် ရန်ကုန်သင်္ကြန်က ပထမဆုံး အကြိမ်ပါ။နှစ်တိုင်း မန္တလေးမှာပါ။ရန်ကုန်ပရိသတ်နဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ရတာ ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။အကြမ်းဖက် ဗုံးခွဲမယ်ဆိုတာကို နှစ်တိုင်းကြားမိတယ်။ဒီလို တွေရှိနေပေမယ့်ပရိသတ်တွေ နဲ့ အဆိုတော်တွေကတော့ သီဆိုမြဲပါပဲ။ ဒီလို အဖြစ်တွေမဖြစ်ဖို့ဆုတောင်း နေပါတယ်။
ပိုင်ဇေရဲထွန်း(Four Elements မဏ္ဍာပ်)
သင်္ကြန်ဆိုရင် ရင်ခုန်တယ် ၊ပျော်တယ်။ နှစ်တိုင်းသူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ မဏ္ဍာပ် ထိုင်ဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်လည်း သူငယ်ချင်းတွေရှိတဲ့ နေရာ တွေဆီကို အိမ်သူ သက်ထားနဲ့ အတူ သွားမှာပါ။ လူအများပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲမှာ အကြမ်းဖက်သူတွေအနေနဲ့ လုပ်ရက်တယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ကြပါ။မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။
သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး မဏ္ဍာပ်ထိုင်ဖြစ်တာပါ။ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကလည်း ကျွန်တော်တို့ မဏ္ဍာပ်မှာ လာထိုင်တာ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ လုံခြုံရေးလည်း စိတ်ချရပါတယ်။ သင်္ကြန်မှာတော့ အားလုံး ပျော်ရွှင်သလို ကျွန်တော်လည်း ပျော်ရွှင်ပါတယ်။
စံရတီမိုးမြင့်( Four Elements မဏ္ဍာပ်)
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မဏ္ဍာပ် အတူထိုင်ရတာ ပျော်တယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ဗုံးခွဲတာတွေ ရှိမယ်ဆိုရင်လည်းညီမစိတ်မပူပါဘူး။ညီမတို့ထိုင်တဲ့ မဏ္ဍာပ်က cctv ကင်မရာတွေတပ်ထားတဲ့ အပြင် လုံခြုံရေးအင်အားကောင်းပြီးစိတ်ချ လုံခြုံရပါတယ်။
ထက်ဘုန်းနိုင်(Jade Dragon အကအဖွဲ့) (sky net မဏ္ဍာပ်)
ဒီနှစ် လည်းဒီမဏ္ဍာပ်မှာဖျော်ဖြေ ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ သုံးနှစ်ရှိပြီပေါ့။ လုံခြုံရေးပိုင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး sky net ကို အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ပါတယ်။
စည်သူမောင် ( Four Elements မဏ္ဍာပ်)
နှစ်ဟောင်း ကအညစ်အကြေးတွေကို အတာရေနဲ့ဆေးကြောရတာ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ ပျော်လည်းပျော်မိတယ်။ ဒီနှစ်တော့ သီရိရှင်းသန့်ရဲ့ဖိတ်ခေါ် မှုကြောင့်ပါ။ မဏ္ဍာပ်မထိုင်ဖြစ်တာ ရှစ်နှစ်ရှိပြီ။ လူတိုင်းဘာသာပေါင်းစုံ ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲကြတဲ့ ပွဲမှာ အကြမ်းဖက်မှု တွေ ဆိုတာ မရှိသင့်ပါဘူး။
ယုသန္တာတင် ( Four Elements မဏ္ဍာပ်)
အခုလိုအနုပညာမောင် နှမတွေနဲ့ မဏ္ဍာပ်ထိုင်ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ အကြမ်းဖက်သမားတွေဝင်လာမယ်ဆိုတဲံသတင်းကြောင့် ပျော်စရာတွေပျက်သွားမယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။
သီရိရှင်းသန့် ( Four Elements မဏ္ဍာပ်စီစဉ်သူ)
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ သူငယ်ချင်း(၇)ယောက် က တစ်ယောက်ခြင်းဆီ တာဝန်ယူမှု အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။ မာစီဒီကုမ္ပဏီက စပွန်ဆာပေးတာပါ။ ပထမဆုံးလုပ်ဖြစ်တာပါ။
ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်း တွင် ရှိသည့် မဏ္ဍာပ် များ ၌ နာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီများသည်လည်း ဧပြီ၁၃ရက် သင်္ကြန်အကြိုနေ့တွင်ပင် ပျော်ရွှင်စွာ ရေကစားလျက်ရှိသည်။ ယင်းမဏ္ဍာပ်များရှိ Four Elements သင်္ကြန်မဏ္ဍာပ်သည် သရုပ်ဆောင် သီရိရှင်းသန့်၊ မိုးယံဇွန်၊ ယုသန္တာတင်နှင့် အနုပညာရှင်(၇)ယောက်က ပါဝင်ကာ တည်ဆောက် ဖွင့်လှစ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
Chromosome Analysis and Amniocentesis (ခရိုမိုဇုမ်...
ဒမ်ဘာဘား၏ တစ်လုံးတည်းသော ဂိုးဖြင့် အနိုင်သုံးမှတ်ရ...
ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့်အတွက် ရာနှုန်းပြည့် နိုင်ပွဲရရ...
အန်ဖီးလ်တွင် မန်ချက်စတာစီးတီးကို အနိုင်ယူပြီး ချန်...
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ၊ ဖြူဖြူကျော်သိန်း ၊ အိုင်းရင်း...
ယာဉ်မောင်းအိပ်ငိုက်၍ လမ်းလယ်ကျွန်းကပ်တုံးများအား တ...
၂၀၁၄ သင်္ကြန် Grand Royal မဏ္ဍပ်မှ ထိုင်းအကမယ်များ အား...
ရွှေဂုံတိုင်ဂုံ တံတား အနီးတွင် သင်္ကြန်လည်သည့် ယာဉ်မှ...
ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုက မြန်မာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကျင်းပ (ရု...
သင်္ကြန်ကာလတွင်း မလုံမခြုံဝတ်စားဖျော်ဖြေမှု မလုပ်ဖို့...
ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကြိုနေ့မှာ အရက်ဘီယာ ရောင်းခ...
သူငယ်ချင်းရဲ့ ကော်ဖီထဲ ကျင်ငယ်ရောထဲ့လို့ ငါးထောင့်...
သင်္ကြန်မှာ ပျော်နေတဲ့ သက်မွန်မြင့် နဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗ...
အရှိန်လွန်ကာ ယာဉ်တိမ်းမှောက်သဖြင့် ယာဉ်ပေါ်ပါသူ (၆)...
ငါးနှစ်ကျော် ကာလအတွင်း မြန်မာ အလုပ်သမား ၇ဝဝဝ ကျော်...
အရှိန်ထိန်းရော်ဘာဘလောက်တုံးများ အသုံးပြုကာ ပူးပေါင...
ဆလွန်းယာဉ်မှ ရေကစားမဏ္ဍပ်အားဝင်ရောက်တိုက်မိသဖြင့် ရေ...
နှစ်သစ်မင်္ဂလာ သင်္ကြန်အခါကို မန္တလေးသူ မန္တလေးသားတွေက ဒ...
Doctors implant lab-grown vagina ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာ ...
၂၀၁၄ သင်္ကြန် အကြိုနေ့ မြင်ကွင်း
နေ့စဉ်ဝင်ကြေး သိန်းနဲ့ချီပေးရတဲ့ မဏ္ဍပ်ကြီးတွေနဲ့ မြ...
Ferrovit ဖါရိုဗစ် ဆရာ ferrovit ကို တစ်နေ့ ၂ လုံးသေ...
အ၇မ်းစိတ်ဖိစီးလာချိန် ချက်ချင်း ပြေပျောက်သွားစေမည်...
ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေက ပညာရှိလို့ ခေါ်စေတာလဲ
CB Matster Card သုံးသူတွေ ... သုံးဖို့ စိတ်ဝင်စားသ...
မန်စီမြို့နယ်တစ်ဝိုက် ရွာသားများ တရုတ်ပြည်ဖက် ထွက်...
သင်္ကြန်အကြုိုနေ့ ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီး ပတ်လမ်းမြ...
ကျပ်လွန်း၍ ချွတ်မရသော လက်စွပ်အား အလွယ်တကူ ချွတ်နည်...
အမေရိကန်တွေလဲ 2014 သင်္ကြန်ဝင်ကဲကုန်ပြီ
Grand Royal မဏ္ဍပ်က အကမယ်များ ကပြဖျော်ဖြေနေပုံ (ရုပ်...